11/27/12 ~ Myanmar Forward
ရှမ်းအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရေး ဆွေးနွေးပွဲကျင်းပ
Posted by drmyochit Tuesday, November 27, 2012, under ပြည်တွင်းသတင်းများ | No comments
ရှမ်းတိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများ ရှမ်းနိုင်ငံရေး ပါတ်ီများ၊ ရှမ်းလူမှုအဖွဲ့အစည်းများ ပါဝင်သည့် ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ခြင်း ဆွေးနွေးပွဲကို ယနေ့ နိုဝင်ဘာ ၂၆ ရက်မှစ၍ ၂၈ ရက်အထိ ၃ ရက်ကြာ ရန်ကုန်မြို့တော်ဝင် နှင်းဆီခန်းမတွင် ကျင်းပပြု လုပ်မည် ဖြစ်သည်။ ယနေ့ နံနက် ၈ နာရီခွဲမှ စတင်ပြုလုပ်ခဲ့သော အဆိုပါ ဆွေးနွေးပွဲသို့ နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံး ၀န်ကြီးဦးအောင်မင်း၊ ဦးစိုးသိန်း၊ လျှပ်စစ်စွမ်းအား ၀န်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးခင်မောင်စိုး၊ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သည့် ရှမ်းပြည်နယ် ပြန်လည်တည်ထောင် ရေးကောင်စီ (RCSS/ SSA)၊ ရှမ်းပြည် တိုးတက်ရေးပါတီ (SSPP/SSA)၊ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ မဟာမိတ်တပ်မတော် ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်း (NDAA မိုင်းလား)၊ ရှမ်းပြည်တပ်မတော် တောင်ပိုင်း (SSA ပြည်သူ့စစ်)နှင့် ရှမ်းအမျိုးသမီး လှုပ်ရှားမှုကွန်ရက်(SWAN-Thai) စသည့် လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်း ငါးခုနှင့် ရှမ်းအမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၊ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ၊ တိုင်းလိုင် (ရှမ်းနီ)အမျိုးသားများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ရေးပါတီစသည့် နိုင်ငံရေးပါတီများမှ ကိုယ်စားလှဝ်များ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။ သမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးတွင် နားလည်မှုလွဲခဲ့သော ဖက်ဒရယ်လစ်ဇင် ကဲ့သို့သော ကိစ္စမျိုးကို မိမိတို့အဖွဲ့အစည်း အသီးသီး နားလည်လက်ခံသော အဓိပ္ပာယ်ရရှိ ဆောင်ရွက်ခြင်းကဲ့သို့သော ကိစ္စရပ်မျိုး၊ အာဏာခွဲဝေ မှုကဲ့သို့သော ကိစ္စရပ်မျိုး၊ သယံဇာတခွဲဝေမှု ကိစ္စရပ်မျိုးကို အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ဆိုခြင်းများကို ဦးစွာပထမ ရှင်းလင်းရန် လိုအပ်သည်ဟု ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှု အဖွဲ့လုပ်ငန်းကော်မတ် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ သမ္မတရုံးဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်းက အမှာစကားပြောကြားရာတွင် ထည့်သွင်းပြော ကြားသွားသည်။
ထို့နောက် ဆွေးနွေးပွဲကို သတင်းမီဒီယာများနှင့် အခြားဖိတ်ကြားထားသော ဧည့် သည်တော်များ မပါဘဲ လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့အစည်း များသာ သီးသန့်ဆွေးနွေး မှုပြုလုပ်ခြင်း ဖြစ်သည်။
မူဆလင်ကုလားများအား ဂေါ်ရခါးအမည်ဖြင့် တပ်ရင်းသစ်များတိုးချဲ့ ဖွင့်လှစ်
အမေရိကန် သမ္မတကြီး အိုဘားမား မြန်မာပြည်သို့ လာရောက်ပြီးနောက်ပိုင်းတွင် ကချင် လက်နက်ကိုင် KIA တပ်မတော် အတွက် စိုးရိမ်ဖွယ်ရာဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ အရင်တုန်းက အိုဘားမား သိနားလည်ထားတာ က ကချင် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့KIA ဆိုတာ ကချင်ပြည်နယ်ကြီးတစ်ခုလုံးကို ကိုယ်စားပြုပြီး ဖွဲ့ထားတာလို့ သိထား ရာမှ KIA ဆိုတာ လိုင်ဇာမြို့နဲ့ တရုတ်-မြန်မာနယ်စပ်က နေရာကွက်ကွက် ကလေးမှာသာ လှုပ်ရှားနေ တဲ့ အဖွဲ့တစ်ခုသာဖြစ် တယ်လို့သိရှိ သွားခဲ့ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကချင်ပြည်နယ်မှာ ခန့်ထားတာ က ကချင်လူမျိုး ၀န်ကြီးချုပ်၊ ကချင်ပြည်နယ် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် အများစုကလည်း ကချင် လူမျိုးတွေ၊ ဒါ့အပြင် ဦးဇခုန်တိန့်ယိန်း တို့လို လက်နက်ကိုင်တဲ့ ကချင်အဖွဲ့တွေ ကိုယ်တိုင် ငြိမ်းချမ်းရေး ယူ၊ ပါတီ ဖွဲ့နေတဲ့အကြောင်းတွေ အိုဘားမား ရှင်းလင်းစွာ သိရှိ သွားခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အရင်က KIO ကချင်ခေါင်းဆောင် တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဒေါက်တာလဂျာ ကိုယ်တိုင် ရွေးကောက်ပွဲ ၀င် နေတဲ့ အခါကျတော့ အိုဘားမားအတွက် KIAလက်နက်ကိုင်တွေရဲ့ သရုပ်ကို ပီပြင်ထင်ရှားစွာ သိမြင်သွားခဲ့ ပါတယ်။
ပိုပြီးဆိုရွားတာကတော့ KIAတပ်တွေရဲ့ အဖျက်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ KIA ဆိုတာ တရုတ် ရဲ့ကျောေ ထာက် နောက်ခံ အဖွဲ့၊ မူးယစ်ဆေးဝါးနဲ့ လက်နက်မှောင် ခိုတဲ့ အဖွဲ့အစည်း ဆိုတာ သိရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ အိုဘားမား ကိုယ်တိုင်က မြန်မာ ဒီမိုကရေစီ အောင်မြင်ဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ အကူအညီတွေပေးမယ်လို့ ကတိ ခံ ထား ပါတယ်။ အဲဒီ အထဲမှာ စစ်ရေး အကူအညီလဲ ပါရှိပါတယ်။ ပြောရမယ်ဆိုရင် KIA အ တွက်ပြေး စရာမြေမရှိ၊ တိုက်ခိုင်းစရာ လူမရှိဖြစ်နေတဲ့ အခြေအနေမို့ ကြံရာမရှိဖြစ်နေ ပါတယ်။ နောက် ဆုံး မှာတော့ အကြံကုန် ဂဠုန်စားချက် ဆိုတဲ့အတိုင်း မူဆလင် တိုင်းပြည်တွေက လက်မခံ တဲ့ နိုင်ငံမဲ့ လူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ မူဆလင်တွေ ကို လူကြားကောင်းအောင် ဂေါ်ရခါးတပ်ရင်း အမည် တပ်ပြီး တပ် အသစ်တွေ ဖွင့် လှစ်ခဲ့ပါ တယ်။
KIA ဗဟိုဌာနချုပ်နဲ့ (၃)မိုင်အကွာမှာ ဂေါ်ရခါးတပ်ရင်း တစ်ရင်းအား လူ(၈၀)ဦးခန့်နဲ့ ဖွဲ့စည်းထားရှိပြီး လစာ အဖြစ်တစ်လ ကျပ်ငွေ တစ်သောင်းထုတ် ပေးပါတယ်။ မူဆလင် ကုလားတွေအတွက် ကျပ်တစ်သောင်းဟာ ဘယ်လို မှ မလုံလောက်ပေမဲ့ နေထိုင်ခွင့် ရတဲ့အတွက် ၀မ်းသာနေကြ ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့နေ့စဉ် စားဝတ်ေ နရေး အတွက် ကတော့ တောင်ယာ စိုက်ပျိုး လုပ်ကိုင်ခြင်းနဲ့ ဆိတ်မွေးမြူခြင်းတွေ လုပ်ကိုင်နေပါ တယ်။ လက်ရှိမှာေ ဂ်ါရခါး တပ်ရင်း အမည်ခံ မူဆလင် ကုလားတွေရဲ့ အဓိက တာဝန်အဖြစ် လူသစ် စုဆောင်းေ ပးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ လူသစ်စုရာ မှာလည်း ရခိုင် ပြည်နယ်နဲ့ အခြားနေရာတွေမှာ နေထိုင်လုပ်ကိုင် စားသောက် လို့ မရတဲ့ မူဆလင် ကုလား အများစုကို စုစည်းပေးဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
စစ်ဦးချုပ်ဂွမ်မော်အနေနဲ့ KIA တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ ရေရှည်ရပ်တည် နိုင်ဖို့အတွက် နည်းလမ်းပေါင်းစုံ အသုံးပြုနေ တာဖြစ် ပါတယ်။ ကချင် ဒုက္ခသည်တွေ အကြောင်းပြပြီး ထောက်ပံ့ ကူညီထားတဲ့ တွေထဲက ကုလား တပ် တွေအတွက် ဆန်နဲ့ ဆားတွေကို ရိက္ခာအဖြစ်ပေး ထားပါတယ်။ ဂေါ်ရခါး တပ်ရင်းတွေ အမည်ခံ ပြီးဖွင့် လှစ် ထားတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ ပြင်ဦးလွင်မှာ ရှိတဲ့ ဂေါ်ရခါး အဖွဲ့ချုပ်က ကန့်ကွက်ထားပါတယ်။ သူတို့ ဂေါ်ရခါး လူမျိုး စစ်စစ်တွေ အနေနဲ့ မူဆလင် မကိုးကွယ်ပါဘူး။ ပြီးတော့သူပုန် မလုပ်ပါဘူး။ အင်္ဂလိပ် အစိုးရ လက် ထက် မှ သည် ဒီကနေ့ မြန်မာအစိုးရ လက်ထက်တိုင် ဂေါ်ရခါး သူပုန်ဆိုတာ မရှိဘူးလို့ လည်း ဂေါ်ရ ခါး အဖွဲ့ချုပ် ခေါင်းဆောင် တစ်ဦးက ပြောဆိုပါတယ်။
ကချင်ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်ပိုင်းကတော့ KIA အနေနဲ့ မူဆလင် ကုလားတွေကို နေရာပေး၊ အစာကျွေး ထားခြင်းဟာ အလွန်အန္တရာယ်များတဲ့ လုပ်ရပ်ဖြစ်တဲ့အတွက် ဂေါ်ရခါးတပ်ရင်း ဖွဲ့တာကို သဘောမကျကြပါ ဘူး။ နောင် အခါမှာ ကုလားဆိုတာ လူဦးရေးတိုးပွားနှုန်းမြန်ဆန်လွန်းတာမို့ ကချင်ပြည်နယ်ရဲ့ အနာဂတ် ဟာ ရခိုင် ပြည်နယ်လို ဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့ ပြောဆိုကြပါတယ်။ ကချင်အမျိုးသမီး တွေအတွက်၊ ကချင် လူမျိုး စုတွေ အတွက် နောင်ကျရင်ကချင်-ကုလားလူမျိုး (ချင်လားလူမျိုး)ဆိုပြီး လူမျိုးသစ် တစ်မျိုး ပေါ် လာနိုင် တယ်လို့ ကချင် လူမျိုးစု ခေါင်းဆောင် တစ်ဦးကလဲ သူ့ရဲ့အမြင်ကိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အပြောင်းအလဲနှင့် လက်ပံတောင်း ကြေးနီ
အစိုးရ စီမံကိန်းများ အကောင် အထည် မဖော်ခင် ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ရှိရန် လိုအပ်ပြီး အကောင် အ ထည် ဖော်နေ ဆဲ စီမံကိန်းများကို တစ်ဖက် သတ် ဖျက်သိမ်းပါက နိုင်ငံတကာ၏ ယုံကြည်မှုဆုံးရှုံးနိုင် သည် ဟု ပြည် သူ့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က မီဒီယာများနှင့် တွေ့ ဆုံစဉ် ပြောကြား သွား ခဲ့ သည်။ ''အခုလက်ပံတောင်း တောင် စီမံကိန်းဆိုရင် စာချုပ်က ချုပ်ပြီး သွားပြီ။ ဒါကို တစ်ဖက်သတ် ဖျက် ခဲ့ရင် တန်ရာ တန်ကြေး ပြန်ပေးရ မယ်။ ဒါကိုလည်း ထည့်စဉ်းစားဖို့ လိုတယ်။ ကမ္ဘာ့အလယ်မှာ တင့် တယ်တဲ့ နိုင်ငံ တစ်ခု ဖြစ်ချင်ရင် ကတိတည်ဖို့ လိုတယ်။ စကားတည် ရမယ်။ ဒီနိုင်ငံ ကတိမတည်ဘူး၊ ဒီနိုင်ငံနဲ့ အလုပ်လုပ်လို့ မရဘူး၊ ဒီနိုင်ငံနဲ့ အလုပ်လုပ်ရင် အချိန်မရွေး ပျက်နိုင်တယ်လို့ တွေးသွားရင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေ စိတ်မဝင်စား နိုင်တော့ဘူး'' ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်က ပြောသည်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော် အစည်း အဝေး နောက်ဆုံးနေ့တွင် အစည်း အဝေး အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်ခြင်း မရှိဘဲ လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ၏ ခွင့်ပြု ချက်ဖြင့် အစိုးရသို့ လွှတ်တော်မှ လက်ပံတောင်းတောင် စီမံကိန်းကို အဖွဲ့ တစ်ဖွဲ့ ဖွဲ့၍ စစ်ဆေးစေရန် နိုင်ငံတော်အစိုးရသို့ တိုက်တွန်း ကြောင်းအဆိုကို တင်သွင်းခဲ့ပြီး ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင် စုဝန်ကြီး ဒုတိယ ဗိုလ် ချုပ်ကြီး ဝေလွင် က ပြန်လည် ရှင်းလင်း ခဲ့ပြီး နောက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ယင်းစီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်၍ မီဒီယာများသို့ ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ် သည်။ ''အစိုးရအနေနဲ့ ပွင့်လင်း မြင် သာမှုရှိဖို့ လိုတယ်။ အစကတည်းက ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိခဲ့ရင်ဒီလိုပြဿ နာ တွေမဖြစ်ဘူး။ အခုက ဒီမိုကရေစီ မရခင်ချုပ်ခဲ့တဲ့ စာချုပ်တွေကို ဒီမို ကရေစီခေတ် မှာ ပြန်ရှင်း ရတာ ဆို တော့ နည်းနည်းတော့ အရှုပ်အရှင်း ရှိတယ်။ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် လိုလို ချင်ချင်နဲ့ပေးထားတဲ့ ကတိ ကိုယ့် ဘာသာကိုယ် လိုလိုချင်ချင်နဲ့ လုပ် ထားတဲ့ အလုပ်တစ်ခု သဘောတူညီ ချက်တစ်ခုကို ဖျက်ဆိုတာ ကတော့ အင်မတန်မှ စဉ်းစားချင့်ချိန်ရမယ့် ကိစ္စပဲ''ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က ပြောကြားခဲ့သည်။
အဆိုပါ လက်ပံတောင်း တောင် စီမံကိန်းကို Wanbo Maing Ltd. မှ ဒေါ်လာ ၉၉၉ သန်း ရာ နှုန်းပြည့် ရင်းနှီးမြှပ်နှံခဲ့ပြီး အကျိုး အမြတ် ခွဲဝေမှုတွင် နိုင်ငံတော်မှ ၁၆ ဒသမ ၈ ရာခိုင်နှုန်း၊ မြန်မာ့ စီးပွားရေးဦးပိုင် လီမိတက်မှ ၁၃ ဒသမ ၈ ရာခိုင်နှုန်း၊ ရင်းနှီးမြှပ်နှံသူမှ ၁၃ ဒသမ ၃၃ ရာခိုင်နှုန်း ရရှိမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ လက်ပံတောင်း တောင် စီမံကိန်းကို နိုဝင်ဘာလ ၁၈ ရက် နေ့မှ စတင် ရပ်နားထားခဲ့ပြီး ထိုကဲ့သို့ ရပ်နားထားသည့်အတွက် တစ်လလျှင် ဒေါ်လာ ၂ သန်း ဆုံးရှုံးနေကြောင်း ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး ဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဝေလွင်က လွှတ်တော်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
''နိုင်ငံတစ်ကာ ဆက်ဆံရေး အရ ဆန်းစစ်ရလျှင် နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံရေးတွင် ထာဝရမိတ်ဆွေ ထာဝရရန်သူ ဟူ၍မရှိပါဘူး။ ထာဝရ အကျိုးစီးပွားပဲ ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော့် ရဲ့ တင်ပြချက်က အမေရိကန်အတွက် မဟုတ်သလို တရုတ်အတွက်လည်း မဟုတ်ပါဘူး။ မိမိနိုင်ငံရဲ့ အကျိုး စီးပွား အတွက်သာ ဖြစ်ပါတယ်'' ဟု ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဝေလွင်က စီမံကိန်းလုပ်ဆောင်ရခြင်းနှင့် ပတ် သက် ၍ ပြန် လည်ရှင်းလင်းခဲ့သည်။
အဆိုပါ စီမံကိန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုများ ကြီးထွားလာ ရခြင်းသည် မီဒီယာ၏ ပယောဂ မကင်းကြောင်း ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဝေလွင်က ထည့်သွင်း ပြောကြားသွားခြင်းအပေါ် ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ကိုယ်စား လှယ် ဒေါ် အောင်ဆန်းစုကြည်က ''အန်တီတို့ ခေတ်မှာ မီဒီယာတွေက အရေးကြီး ပါ တယ်။ စောစော က ဝန်ကြီး ပြောသွားတဲ့အထဲမှာ မီဒီယာတွေရဲ့ လှုံ့ဆော်မှုတွေ ပါတယ်လို့ ပြောသွား တယ်။ ဒါ ကို မျက်စိစုံ မှိတ်ပြီး မငြင်း နဲ့။ ရှိနိုင်တာပဲ။ ဘယ်သူမှ အမြဲ မမှန်ဘူး။ မီဒီယာ လည်း အမြဲမမှန် နိုင်ဘူး။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်သုံး သပ် ဖို့ပဲ လိုပါတယ်'' ဟု မီဒီယာ များနှင့် တွေ့ ဆုံစဉ် ပြောကြား သွားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
(Messenger News Journal)
ဆီးဂိမ်းအတွက် အကြံပေးနိုင်တဲ့ အားကစားဝန်ကြီးဌာန ၀က်ဆိုဒ် ၃ ခု
မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား အားကစား ကော်မတီနှင့် အားကစား ၀န်ကြီးဌာန အနေနဲ့ အင်တာနက်မှာ www.myasoc.org, www.myasoc.com.mm နဲ့ www.mosports.gov.mm အစရှိတဲ့ website ၃ ခုကို လွှင့်တင် ထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အခုလို အဆိုပါ website ၃ ခုကို ထားရှိပေး ထားခြင်း ဟာလည်း မြန်မာနိုင်ငံမှာ အိမ်ရှင် အဖြစ် လက်ခံ ကျင်းပမယ့် ၂၇ ကြိမ်မြောက် အရှေ့တောင် အာရှ အားကစား ပြိုင်ပွဲကြီးကို ကျင်းပရေး၊ အောင်နိုင်ရေးနဲ့ ကြိုတင် ပြင်ဆင်ရေး လုပ်ငန်းများမှာ ပါဝင်ပြီး အကျယ်ပြန့်ဆုံး ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက် နိုင်ဖို့ အတွက်ကို ရည်ရွယ် ဆောင်ရွက်တာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။အဆိုပါ ၀က်ဘ်ဆိုက် များမှာ နိုင်ငံတကာမှ သိရှိနိုင်ဖို့ မြန်မာနိုင်ငံ အကြောင်း၊ အိုလံပစ် ကော်မတီ၊ အားကာ အဖွဲ့ချုပ်များ၊ အိုလံပစ် ပြိုင်ပွဲများ၊ အာရှအားကစား ပြိုင်ပွဲများနဲ့ အရှေ့တောင် အာရှ အားကစား ပြိုင်ပွဲများ အပြင် ၂၇ ကြိမ်မြောက် အရှေ့တောင် အာရှပြိုင်ပွဲနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်းအရာများ အမှတ်တံဆိပ်၊ လာဘ်ကောင်များနဲ့ ပြိုင်ပွဲ ကျင်းပမယ့် ကွင်း၊ အားကစားရုံများ ပွဲစဉ် ဇယားများ အားကစား နည်းများ ပြည့်စုံစွာ ဖော်ပြထား တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အားကစား သတင်းများ၊ အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ အားကစား အဖွဲ့ချုပ် များနဲ့ ဆက်သွယ်ဖို့ လိပ်စာများ၊ အားကစား နည်းစနစ် အထောက်အကူပြု ဗီဒီယိုများ အပြင် ဂုဏ်ပြုတေး သီချင်းများပါ ပါရှိပြီး အကြံပြု လိုပါကလည်း ဆက်သွယ်ဖို့ e-mail ဖုန်း၊ ဖက်စ်နံပါတ်များ ကိုပါ ဖော်ပြထား ရှိတာ ဖြစ်တယ် လို့လည်း သိရပါတယ်။
ပြည်ပ စစ်သား၊ ဒို့စစ်သား
ခိုင်မာကာ တည်ကြည်..ဒို့စိတ်ထား သည်။ တပ်မတော် သားတွေ သည် ဇွဲနှင့် သတ္တိညီ။ ရန်သူ ကို ဘာမထီ အပြုတ်နှံ လို့ အတည် ဒို့ပြည်သူ ကို မထိနဲ့ မီးပွင့်မည် ဆိုတဲ့ မြန်မာ့ တပ်မတော်သား တိုင်း သိကြတဲ့ စစ်သီချင်းသံ လို ပါပဲ။ တပ်မတော်ဆိုတာဟာ ပြည်သူ့ အတွက် ဖြစ်ပါ တယ်။ ဒီပြည်သူတွေ ကာကွယ်ဖို့ အတွက်ပဲ တပ်မတော် သားတွေ ဟာ အပင်ပန်း ခံလေ့ကျင့်ကာ အသက်ပေးပြီး တိုင်းပြည် တာဝန်ကို ထမ်းဆောင်ကြ ရ ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ငါ့သားများ စစ်ထဲ ဝင်ရင်လေ… သူ့ကို ပြောလိုက်ပါ၊ စစ်တပ် ဆိုတာ အမှန် တကယ် သာ လိုက်နာ နိုင်မယ်ဆိုရင် ယောက်ျားကောင်း ယောက်ျား မြတ်တွေ မွေးထုတ် ရာ ကျောင်းတော်ကြီးပေါ့ ဆိုတဲ့အတိုင်း အမှန်တကယ် လိုက်နာနိုင်မှသာ ယောက်ျား ထဲမှာ ယော က်ျားကောင်း ယောက်ျားမြတ်ေ တွ ဖြစ်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သူများနိုင်ငံတွေမှာ ဒီပုံထဲကလိုမျိုး အပြစ်ပေးတာတွေရှိသလို ပျော်စေ ပျက်စေ ချွေးတလုံးလုံးနဲ့ မြန်မာ စစ်သားများလည်း ကြုံဖူးခဲ့ကြပါတယ်။
သူများနိုင်ငံတွေမှာ ဒီပုံထဲကလိုမျိုး အပြစ်ပေးတာတွေရှိသလို ပျော်စေ ပျက်စေ ချွေးတလုံးလုံးနဲ့ မြန်မာ စစ်သားများလည်း ကြုံဖူးခဲ့ကြပါတယ်။ သူတို့မှာလည်း ငမ်းဖူးကြသလို ကိုယ်တို့မှာလည်း ပြင်ဦးလွင်မှာ ဂွမ်းဖူးခဲ့ကြပါသေးတယ်။ စစ်ရေးပြမှာ သပ်ရပ်စနစ်ကျသော စစ်သားများဖြစ်ဖို့ ဒို့ဆရာများကလည်း ဒါမျိုးတွေ လုပ်ပေးခဲ့ဖူးတယ်။
သူများတွေ မိုင်းအတွက် ဒီလိုရှင်းပေမယ့် ဒို့ကတော့ ပြည်သူ့အကျိုးအတွက် ဥာဏ်ကိုလွှာသုံးပြီး ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ ရင်းပြီး ရှင်းပေးရပါတယ်။
ညီညာမှုအတွက်၊ အကွာအဝေးအတွက် သူများတွေ ဒီလိုတိုင်းရပေမယ့် ကိုယ်တို့ ဆရာတွေကတော့ မျက်စိနဲ့ကြည့်ယုံ လုံလောက်ခဲ့ဖူးပါတယ်။
လုံလောက်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ သူများတွေ အားလပ်ချိန်မှာ ဒါမျိုး အားဖြည့်နိုင်ကျပေမယ့် ကိုယ်တို့ကတော့ ရေတောင် အလုအယက် တစ်ယောက်တစ်ခွက်သောက်ပြီး လေ့ကျင့်ခဲ့ကြရတယ်။
ညီညာမှုအတွက် ပေတံကပ်ပြီး လေ့ကျင့်စရာ မလိုအောင် ဒို့ဆရာတွေက မျက်စိကောင်းခဲ့ကြပါတယ်။
အတင်းအဓမ္မ လက်ထပ် ခိုင်းစေမှု ရန်ကုန်မြို့တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့
ကျွန်မသည် ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး ဓာတ်မှန်ဌာနမှ ဓာတ်မှန်ကျွမ်းကျင်အဆင့်(၂)ဖြင့် တာဝန် ထမ်းဆောင်နေ သူ တစ်ဦး ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်မ၏အမည်မှာ မသင်းဟေမာစိုး (၂၈)နှစ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်မ ၁၄-၁၀-၂၀၁၂ ရက်နေ့ နံနက် ၁၀ နာရီက ဆေးရုံကြီး အဆောင်တွင်ရှိနေစဉ် ဆွေမျိုး နီးစပ်တော်စပ်သော မဇင်မာစိုး၊ မဇင်မင်းစိုး၊ သန်းဇော်အောင်၊ ချစ်ကိုကိုတို့မှ ဆူပါကပ်စတန်ကား (ဇ)/၈၀၇၄ ဖြင့် လာရောက်ခေါ် ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ ပုဇွန်တောင်တွင် မဇင်မာစိုးနှင့် အတူ ဆံပင်ညှပ်ပြီး တာမွေ အခွန် လွတ်ဈေးရှိ မမာလာမြင့် ဆိုင်သို့သွားပြီး မဇင်မာစိုးနှင့် မဇင်မင်းစိုးတို့ ဆင်းနေခဲ့ပါတယ်။ အခွန်လွတ်ဈေး ကနေ တစ်ဆင့် ကျွန်မကို ဆေးရုံပို့ပေးမယ်ပြောပြီး မပို့တော့ဘဲ သန်းဇော်အောင်မှ ဓားထောက်ပြီး မအော်နဲ့ ဟု ပြောပြီး ခရမ်းသုံးခွဘက် ခေါ်သွားပါတယ်။
လမ်းတစ်နေရာတွင် ကားပျက်သွားသဖြင့် ဒေါ်မာလာမြင့်နှင့် စိုးအေး(ခ) ဒါဝတ် တို့ ပြန်လာ ခေါ်ပါတယ် ။ ပြန်ေ ခါ် လာပြီး သင်္ဃန်းကျွန်း လွတ်လပ်ရေးရပ်ကွက်မှ အိမ်တစ်အိမ်တွင် ဗလီ ဆရာခေါ်ပြီး သန်းဇော်အောင်နှင့် လက်ထပ်ခိုင်းပါသည်။ ထိုစဉ် အချိန်မှာ ည ၃ နာရီခန့် ရှိပါပြီ။ လက် ထပ်ပြီးနောက် အခွန်လွတ်ဈေး ရှိ ဒါဝတ်(ခ) စိုးအေးနှင့် ဒေါ်မာလာမြင့်တို့ ဆိုင်သို့ အတင်းပို့ခဲ့ ပါတ်ယ်။ ဆိုင်တွင် ကျန်ခဲ့ပြီး ကျွန်မမှ သန်းဇော်အောင် အား အမျိုးမျိုး တောင်းပန် ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မမှာ နံနက်တွင် နိုင်ငံတော်မှ ဓာတ်မှန် ရိုက်စေရန် ခိုင်းစေထားသော အလွန် အရေးကြီး ပုဂ္ဂိုလ် ၄ အား ဓာတ်မှန်ရိုက်ရန် တာဝန်ရှိပြီး ဓာတ်မှန် ခန်းသော့များလည်း ကျွန်မထံ ပါလာသည့် အကြောင်း ပြောပြတောင်း ပန်ပြီး နံနက် ၆ နာရီတွင် ပြန်ပြေး လာခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မ၏အဖြစ်အပျက်များကို ဟင်္သာတရှိ မိဘများထံ ဖုန်းဆက် အကြောင်းကြားခဲ့ပါတယ်။ မိဘများကလည်း စိုးရိမ်ပူပန် စိတ်များဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ ထိုသူများ၏ ရန်ကို ရှောင်တိမ်းရန်အတွက် မိဘများက ခွင့်ယူပြီး ဟင်္သာတတွင် ခေတ္တပုန်း အောင်းခိုင်းသဖြင့် မိဘများနှင့်အတူ ဟင်္သာတတွင် နေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ယခုဖြစ်ရပ်ကို ဦးဆောင်စီစဉ်သူမှာ အောင်မြင့်(ခ)အီစမိုင်း (အမှတ်(၁၈)၊ ၁၂၇ လမ်း၊ ၄ လွှာ သပြေ ကုန်းရပ်ကွက်၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်) ဖြစ်ပါတယ်။ သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်များကို သူကရှင်းပေး မယ်ပြောပြီး ကြိုးကိုင်စီစဉ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့အားလုံးက ဆေးရုံကြီးတွင် ကျွန်မ လက်ထပ်ထားသော စာချုပ်အား မိတ္တူများ လာရောက်ဖြန့်ဝြေ ခင်း ၊ ဟင်္သာတ ရှိ မိဘများအိမ်ရှေ့မှ ကားဖြင့်လာရောက် အရှက်ခွဲခြင်းများ ပြုလုပ်လာကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်မ လည်း လသာရဲစခန်းတွင် ၂-၁၁-၂၀၁၂ ရက်နေ့တွင် သွားရောက်အမှုဖွင့် တိုင်ကြားခဲ့ပါ တယ်။ ၈-၁၁-၂၀၁၂ ရက်နေ့တွင် ရဲစခန်းမှ ခေါ်သဖြင့် သွားရောက်လက်မှတ် ထိုးခဲ့ရပါတယ်။ (ပ) ၃၄၀/၂၀၁၂၊ ပုဒ်မ ၃၆၆/၁၁၄ ဟု သိရပါတယ်။
တစ်ဖက်မှ တရားခံများကို စတင်ပြီး ခေါ်စစ်ကတည်းက ဟင်္သာတအိမ်ကို ဖုန်းနှင့်အမျိုးမျိုးဆဲဆို ခြိမ်းခြောက် ခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီကိစဖြစ်ပြီးကတည်း ကျွန်မအမေလည်း နှလုံးရောဂါဖြင့် ဆေးရုံကို တင်ခဲ့ရပါ တယ်။ ကျွန်မ မှာလည်း အရှက်တကွဲ အကျိုးနည်းဖြစ်ရသဖြင့် လုပ်ငန်းခွင် သို့ ပြန်မ၀င်ရဲသေးပါ။
ရဲစခန်းမှ တရားခံများကို စစ်ဆေးနေတဲ့အချိန်မှာပဲ ကျွန်မကို အနှောင့်အယှက် အမျိုးမျိုးပြု လုပ်တဲ့ အပြင် လူကို ပါ သတ်မည် ဟု ခြိမ်းခြောက်ပြော ဆိုလာပါတယ်။ ယခုအခါ ၄င်းတို့မှာ မလေးရှားသို့ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ရန် ကြိုးစားနေပါတယ်။ သူတို့လက်ထဲမှာ လည်း ပတ်စ်ပို့စ်များ ကို အသင့်ကိုင်ဆောင်ထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ၀န်ထမ်း တစ်ယောက်အနေနှင့် ဆက်လက် တာဝန်ထမ်းဆောင် ရန်မှာလည်း အခက်အခဲများစွာ ရှိနေတဲ့ အပြင် တရား ဥပဒေ၏ စိုးမိုးမှုကိုလည်း မရရှိဘဲ ကြောက်ရွံ့စွာ ပုန်းအောင်းနေရပါတယ်။
ဒါကြောင့် ကျွန်မကို အကူအညီပေးဖို့ အနူးအညွတ် တောင်းပန်အပ်ပါတယ်။
ကာယကံရှင် ပြောပြသော အကြောင်းအရာကို မူရင်းအတိုင်း တင်ပေးခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
လူအများရှေ့တွင် နမ်းမိသည့်အတွက် မဖွယ်မရာပြုလုပ်သည်ဟု ဝေဖန်ခံရသော ထိုင်ဝမ် မင်းသမီး
Posted by drmyochit Tuesday, November 27, 2012, under နိုင်ငံတကာသတင်းများ | No comments
ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံ တောင်ပိုင်းမှာ ကျင်းပတဲ့ ၄၉ ကြိမ်မြောက် ရွှေမြင်းရုပ်ရှင်ဆုပေးပွဲသို့ တရုတ်၊ ဟောင်ကောင်နဲ့ ထိုင်ဝမ်နိုင် ငံတို့မှ နာမည်ကျော် အနုပညာရှင်များ တက်ရောက်ကြပါတယ်။ အဆိုပါ ဆုဟာ တရုတ် စာတမ်းထိုး ရုပ်ရှင်များအတွက် အော်စကာဆု တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး နာမည်ကျော်များဟာ အပြိုင်အဆိုင် ၀တ်စုံ များဖြင့် တက်ရောက်ကြပါတယ်။ ထိုသို့တက်ရောက်လာကြတဲ့ အနုပညာရှင်များထဲမှ ထိုင်ဝမ်မင်းသမီး လင်ချီလိန်း( Lin Chi-ling) ဟာ တော့ သူမရဲ့ အလှအပတွေကို ထင်ရှားစေတဲ့ ၀တ်စုံကြောင့် ပွဲတက်လာ သူများ၏ အာရုံကို ဆွဲဆောင်နိုင် ခဲ့ပါတယ်။
အကောင်းဆုံး ဒါရိုက်တာဆုကို ပေးအပ်ရန်အတွက် သူမ စင်မြင့်ပေါ်ကို တက်လာပြီးနောက် ဒါရိုက်တာကို ဆုပေး ချိန်မှာ ကိုယ်လေးကိုင်း ညွှတ်လိုက်တော့ ပေါ်ထွက်လာတဲ့ အလှအပများကြောင့် အင်တာနက် ပရိ သတ်ကြီးဟာ ဒါဟာလုံးဝ မသင့်လျော်ဘူး။ မိန်းမ မဆန်ဘူးဆိုပြီး အပြင်းအထန် ဝေဖန်ကြပါသတဲ့။
နောက်တော့မှ စင်မြင့်ပေါ်မှာ အစီအစဉ်ကြေငြာသူ Huang Bo ကို နမ်းလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ အဆိုပါ အနမ်း ကို မဖွယ်မရာ အဖြစ် ဝေဖန်ကြပါလေရော။ ဆုကိုပေးနေစဉ်မှာတော့ သူမဟာ ဟောင်ကောင်အသည်းစွဲ Andy Lau နဲ့ အတူတွဲပြီး နမ်းတဲ့အခန်းလေး ရိုက်ချင်ပါတယ်လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့ အနမ်းခြွေခဲ့ပါသတဲ့။
သြော်..အနမ်း..အနမ်... အမှတ် ရစရာတွေပါပဲ။
ပညာရေးကို စီးပွားရေးဆန်တာ မလွန်ကဲဖို့
Posted by drmyochit Tuesday, November 27, 2012, under ပေးစာ | No comments
ပုဂ္ဂလိက ကျောင်းတွေဖွင့်ခွင့် ပေးမယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေထွက် ပေါ်လာစကတည်းက ဘယ်လိုမြင်သလဲ ဆိုတဲ့မေးခွန်း မကြခဏ အမေးခံရတယ်။ ကိုယ်ပိုင် သင်တန်းကျောင်းတစ်ခုဖွင့်ပြီး နှစ်ပေါင်းနှစ်ဆယ် အစိတ်လောက် ဆရာလုပ်ခဲ့သူ ဖြစ်တာကြောင့် လာမေးကြတာဖြစ်တယ်။
ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းဆရာ လုပ်ခဲ့ရုံသာမက ကိုယ်တိုင်ကလည်း ပုဂ္ဂလိက သာသနာပြုကျောင်းမျိုးမှာ နေ လာခဲ့တာဖြစ် တာကြောင့် ပုဂ္ဂလိကကျောင်းတွေ ဖွင့်ခွင့်ပေးတာ ကောင်းတယ်လို့ ယူဆပြီး ကြိုဆိုပါ တယ်။ လက်ရှိအနေ အထားမှာ ကျောင်းသားဦးရေ များလွန်းပြီး မနိုင်မနင်း ဖြစ်နေတဲ့ အစိုးရကျောင်း တွေလည်း ဝန်ပေါ့သွားမှာ ဖြစ်တယ်။ ဝန်ပေါ့သွားတဲ့အတွက် စည်းကမ်းပိုင်းရော သင်ကြားရေးအပိုင်း ပါ ဖိဖိစီးစီး ဆောင်ရွက်နိုင် ကြမှာဖြစ်လို့ အစိုးရကျောင်းများရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် တက်လာနိုင်ပါ တယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ အစိုးရကျောင်းများရဲ့ မနိုင်ဝန်ကြောင့် ပေါ်ပေါက်လာရတဲ့ ကျူရှင်မျိုးစုံ လည်း တဖြည်းဖြည်း ပပျောက်သွား ပါလိမ့်မယ်။ မိဘများနဲ့ ကျောင်းသားများ အတွက်လည်း ရွေးချယ် စရာတွေရှိလာတာကြောင့် ကြိုက်ရာကျောင်း အပ်နိုင်လို့ စိတ်ချမ်းသာမှု ရှိလာကြမယ်။
နောက်ထပ်ဝမ်းသာရမယ့် ကိစ္စတစ်ခုကတော့ လူတိုင်းဖွင့်ခွင့် မရတဲ့အတွက် အရေအတွက် နည်းနည်း သာရှိတဲ့ ပုဂ္ဂလိကကျောင်းတွေက သူတို့စိတ်ကြိုက် နင့်နေအောင်တောင်းတဲ့ ကျောင်းလခတွေ လျော့ကျသွား နိုင်စရာရှိတာဖြစ်တယ်။ အခုလောလောဆယ်တော့ ပုဂ္ဂလိက ကျောင်းတွေမှာ ရေပေါ်ဆီ လူတန်းစား သားသမီးတွေသာ အများစု တက်နိုင်ကြပါတယ်။ နောင်ကျရင်တော့ လူလတ်တန်းစား သားသမီးများပါ တက်လာနိုင်ကြလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။ လက်လုပ်လက်စား ဆင်းရဲသူ ဆင်းရဲသား သားသမီးများတော့ ဘယ်တတ်နိုင်ကြမှာလဲ။ သူတို့တစ်တွေကတော့ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာတဲ့ အစိုးရကျောင်းတွေသာ တက်ကြရမှာပါ။ အဲဒီအချိန်ကျရင် အစိုးရကျောင်း တွေကလည်း ဝန်ပေါ့သွားပြီ ဖြစ်လို့ နိုင်နိုင်နင်းနင်း သင်ကြားနိုင် တော့မှာကြောင့် အရည်အသွေးတွေ မြင့်တက်လာကြမှာပါ။
ရှေးကလည်း သာသနာပြု ကျောင်းတွေနဲ့ တခြားပုဂ္ဂလိက ကျောင်းတွေအများကြီး ရှိပေမယ့် အစိုးရ ကျောင်းတွေမှာလည်း စည်စည်ကားကား ရှိကြတာပါပဲ။ ပညာသင်ကြားမှု အရည်အသွေးကလည်း မနည်းလှပါဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ထိပ်တန်းခေါင်းဆောင်ကြီး တွေဖြစ်ကြတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၊ ဦးနု၊ ဦးဗဆွေ၊ သခင်သန်းထွန်း၊ သခင်ဗဟိန်း စတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေ အားလုံးဟာနယ်က အစိုးရအထက်တန်း ကျောင်းတွေက အောင်လာကြသူတွေချည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သာသနာပြု စိန့်ကျောင်းထွက်တွေထဲက နိုင်ငံခေါင်းဆောင် အဆင့်ရောက်သူ အင်မတန်နည်းပါတယ်။ သူတို့အမြင့်ဆုံး ဖြစ်တာကတော့ အတွင်း ဝန်ဆိုတဲ့ ဗျူရိုကရက် အကြီးစား အဆင့်မျိုးသာ ဖြစ်ပါတယ်။
အစိုးရကျောင်းများရဲ့ အားသာချက်ကတော့ နိုင်ငံချစ်စိတ် လူမျိုးချစ်စိတ်ရှိတဲ့ လူငယ်တွေ မွေးထုတ် ပေးနိုင်တဲ့ အချက်ဖြစ်တယ်။ စိန့်ကျောင်းခေါ်တဲ့ သာသနာပြုကျောင်းများက သူတို့သာသနာနဲ့ သူတို့ ယဉ်ကျေးမှု ဖြန့်ချိဖို့သာ အဓိကထားကြတယ်။ တခြားပုဂ္ဂလိက ကျောင်းများကလည်း စီးပွားရေးကိုသာ အာရုံစိုက်တာများတယ်။ သာသနာပြု ကျောင်းတွေလို စည်းကမ်း မတင်းကျပ်ဘူး။ ကျောင်းသားကို အလိုလိုက်တဲ့ နည်းနဲ့ဆွဲဆောင်လေ့ရှိတယ်။ သာသနာပြုကျောင်းတွေနဲ့ ပုဂ္ဂလိက ကိုယ်ပိုင်ကျောင်း တွေအားလုံးကို အစိုးရက ၇ တန်းနဲ့ ၁ဝ တန်း အစိုးရစစ် စာမေးပွဲနဲ့ထိန်းချုပ်ထားတယ်။ မြန်မာပြည်က ကျောင်းသားအားလုံး မဖြေမနေရ ဝင်ဖြေရတယ်။ အစိုးရစစ် ၁ဝ တန်းအောင်မှ တက္ကသိုလ်တက်ခွင့်ရတယ်။ အဲဒီတော့ ပုဂ္ဂလိက ကျောင်းအားလုံးဟာ ၇ တန်းနဲ့ ၁ဝ တန်းမှာ အစိုးရ ပြဋ္ဌာန်စာအုပ်တွေ မသင်မဖြစ်သင်ရတယ်။ သာသနာပြု ကျောင်းတွေကတော့ သူတို့ပြဋ္ဌာန်းစာရော အစိုးရ ပြဋ္ဌာန်းစာပါ သင်လေ့ရှိကြတယ်။ အစိုးရစစ် ၇ တန်းအောင်ပြီး ကျောင်းစစ် မအောင်သူကို အတန်းတက်မပေးဘဲ ၇ တန်းမှာပဲ ဆက်ထားတာမျိုးလည်း ရှိတယ်။ ကျောင်းသားတချို့က ကျောင်း ထွက်ပြီး တခြားပုဂ္ဂလိ ကကျောင်းမှာ ၈ တန်း သွားတက်ကြတယ်။
အခု နှစ်ပေါင်း လေးဆယ်ငါးဆယ် နီးပါးကြာမှ ပုဂ္ဂလိကကျောင်းတွေ ပြန်လည်ဖွင့်ခွင့်ပြုတာ ဖြစ်လေ တော့ဟိုလူကဖွင့် ဒီလူကဖွင့်နဲ့ နေရာတကာ ကျောင်းတွေပေါ်ထွက်လာကြမှာ သေချာပါတယ်။ ရှေးကနဲ့ မတူတာက ကမ္ဘာတစ်လွှားမှာ ပညာရေးကို စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးများသဖွယ် လုပ်ကိုင်လာ ကြတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်။ နိုင်ငံခြားက နာမည်ကြီး ကျောင်းတွေက ကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာ ကျောင်းခွဲတွေ လိုက်ဖွင့်ပြီး စီးပွားရှာကြတယ်။ ကုန်တိုက်ကြီးတွေက ဆိုင်ခွဲတွေနေရာ အနှံ့ဖွင့်လှစ်သလို ဖြစ်နေတာ ကြောင့် ပညာထက် အမြတ်ငွေကြေးကို ပိုပြီး အလေးထားကြတယ်။ စီးပွားရေးလောကရဲ့ ထုံးစံအ တိုင်း ပညာရေးကို ဗန်းပြပြီး ပိုက်ဆံရဖို့ သက်သက်လုပ်တဲ့ ကျောင်းတု တက္ကသိုလ်တု ဘွဲ့လက်မှတ်တု ဆိုတာတွေလည်း ရောကောသောကော ပေါ်ပေါက်လာကြတယ်။ အဲဒီအတု အယောင်သမားတွေရဲ့ အဓိကပစ်မှတ်က ဈေးကွက်စီးပွားရေး ကူးပြောင်းစဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေ ဖြစ်ကြတယ်။ စီးပွားရေးသမားတွေ များများစားစား ဝင်မလာသေးတဲ့ အခုအချိန်မှာတောင် ကျောင်းသားဗီဇာ ရဖို့လောက်သာ ထောင်ထားတဲ့ကျောင်းတု တက္ကသိုလ်တုတွေရဲ့ အလိမ်ခံလိုက်ရတဲ့ သတင်းမျိုးတွေ ကြားနေရတယ် မဟုတ်လား။
ပုဂ္ဂလိကကျောင်းတွေ တရားဝင်ဖွင့်လှစ် လာကြတဲ့အခါမှာ နိုင်ငံခြားက လာပြီးဖွင့်မယ် ကျောင်းတွေကို အထူးဂရုစိုက်ပြီး စစ်ဆေးကြပ်မတ်ဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။ လာဖွင့်မယ့် သူတို့မူရင်းနိုင်ငံမှာ တရားဝင်မှတ်ပုံ တင်ပြီးထားတဲ့ ကျောင်းဟုတ်ရဲ့လား။ အဆင့်အတန်း ဘယ်လောက်ရှိလဲ။ ကမ္ဘာကျော်တက္ကသိုလ်ကြီး တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ထားလို့ အဲဒီ တက္ကသိုလ်ကြီးတွေကို တိုက်ရိုက် ဝင်ခွင့်ရတယ်ဆိုတာ မှန်ရဲ့လား။ မြန်မာပြည်မှာ လာရောက်နေထိုင် သင်ကြားပေးမယ့် နိုင်ငံခြားသားဆရာ ဆိုသူများဟာ အမှန်တကယ် ဆရာလုပ်နိုင်တဲ့ အရည်အချင်း ရှိသူများ ဟုတ်ရဲ့လား။ ခရီးသွား ဟန်လွှဲလုပ်တဲ့ 'ကျောပိုးအိတ်သမား' တွေများ ဖြစ်နေမလားဆိုတဲ့ အချက်တွေကို သေသေချာချာ စစ်ဆေးကြပ်မတ်ဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။ နိုင်ငံခြားသားဆရာများ ကိုယ်တိုင် သင်ပြသည်လို့ ကြော်ငြာတဲ့ ကျောင်းတော်တော်များများက ဆရာဆိုသူတချို့ဟာ ဆရာလုပ်နိုင်တဲ့ ပညာအရည်အချင်းမရှိတဲ့ 'ခြေသလုံး အိမ်တိုင်' ကျောပိုးအိတ် သမားတွေ ဖြစ်နေတတ်လို့ပါ။ ကိုယ်တိုင်အများကြီး ကြုံတွေ့ဖူးလို့ သိနေတာပါ။
ခေတ်ရဲ့လိုအပ်ချက်အရ ပုဂ္ဂလိက ကိုယ်ပိုင်းကျောင်းတွေ ဖွင့်ခွင့်ပေးတာ ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပညာရေးကို အလွန်အကျွံ စီးပွားရေးဆန်တာ (Commericialized) မျိုး ဖြစ်မသွားအောင်တော့ သတိပြု သင့်ပါတယ်။ ပညာရေးကို စီးပွားရေး လုပ်ငန်းကြီးသဖွယ် လုပ်လာကြတဲ့အတွက် 'ဘွဲ့ရတွေကို စက်ရုံကြီးထဲမှာ ပုံစံသွင်းပြီး အမြောက်အမြား (Mass production) ထုတ်လုပ်နေကြတဲ့ အတွက် အရည်အသွေးတွေကျဆင်း ကုန်ပြီ' လို့ သူတို့အနောက် နိုင်ငံကြီးတွေက တက္ကသိုလ်ပါမောက္ခ တွေကိုယ်တိုင် စိတ်ပျက်လက်ပျက်နဲ့ ညည်းညူနေတဲ့ အသံတွေကိုလည်း ဂရုစိုက်ပြီး နားထောင်ကြဖို့ လိုတဲ့အကြောင်း သတိပေးနှိုးဆော် လိုက်ချင်ပါတယ်။
လှပသောလိပ်ပြာလေး ၃ ကောင်
Posted by drmyochit Tuesday, November 27, 2012, under ဆောင်းပါး | No comments
ဒီနေ့ နိုဝင်ဘာ ၂၅ ရက်။ ဒီနေ့ဟာ တကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အမျိုးသမီးအားလုံးအပေါ်က အကြမ်းဖက်မှုအ၀၀ကို ဆန့်ကျင် သောနေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၉၉ ခုနှစ်မှ စ၍ ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့ကြီးက နိုဝင်ဘာ ၂၅ ရက် ကို အထွေထွေညီလာခံ ဆုံးဖြတ် ချက် ၅၄/၁၃၄ အရ (The 25th November as the International Day for the Elimination of Violence Against Women (Resolution 54/134) ကမ္ဘာ့အမျိုးသမီးများ အပေါ်ကျရောက်တဲ့ ကြမ်းတမ်းရက်စက် မှုအ၀၀ ပပျောက်ရေးနေ့ လို့သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီလို ကုလသမဂ္ဂ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာ ၁၉၅၀-၁၉၆၀ နှစ်များအတွင်း ဒိုမေရိကန် ရီပတ်ဘလစ် နိုင်ငံက အထူးဖြောင့်မတ် ရဲရင့်ပြီး အကြမ်းဖက်တဲ့အာဏာရှင်ကို မကြောက်ဘဲ ဖီဆန်ခဲ့တဲ့ မျိုးချစ်အမျိုးသမီး ကလေး ၃ ဦးကို ရည်စူးဂုဏ်ပြုခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးလေး ဖတ်ပြီးရင် ၁၉၆၀ နိုဝင်ဘာ ၂၅ နေ့မှာ ကြမ်းတမ်းတဲ့ အာဏာ ရှင် လက်ချက်နဲ့ ကျဆုံးခဲ့တဲ့ လိပ်ပြာမယ်လေး ၃ ယောက် ဖြစ်လေတဲ့ ဒိုမေရီကန်ရီပတ်ဘလစ် နိုင်ငံက ပက်ထရီရှာ၊ မီနာဗာ၊ မာရီရာတို့ ညီအမ ၃ယောက်ကို အမှတ်ရစေချင်ပါတယ်။
ဒီနေ့ နိုဝင်ဘာ ၂၅ ၂၀၁၂၊ လိပ်ပြာလေး ၃ ကောင်ကို ရာဖဲ ထျူဇီဂျို ဆိုတဲ့ စစ်အာဏာရှင်တဦးက သူ့ဘေးက ထောက် လှန်းရေး လူမိုက်လူဆိုးတွေသုံးပြီး ခြေမွဖျက်ဆီးခဲ့တာ ဒီနေ့ဆို ၅၂ နှစ် ပြည့်ခဲ့ပါပြီ။ စစ်အာဏာရှင် ထျူဇီဂျိုက သူတို့ အသက်ကိုပဲ ဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ သူရဲကောင်းဆိုတာ သူတို့ ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့ သမိုင်းကို ဘယ်သူဖျက်ဖျက်၊ ဘယ်သူ သတ်သတ် ပျက်ရိုးထုံးစံမရှိပါ။ သူတို့ခြေရာ၊ သူတို့အစွမ်းသတ္တိတွေကို ဘယ်သူတွေက ဘယ်လောက်ပဲဆိုးတဲ့ အကြမ်း ဖက်တဲ့ နည်းတွေသုံးသုံး သူတို့ ဖျက်ဆီးချင်တိုင်း ဖျက်ဆီးလို့ မရနိုင်ပါ။ ကြည့်တတ်ရင် ဒီလိပ်ပြာလေး ၃ ကောင် က သူတို့ချစ်တဲ့ဒိုမေနီကန် ကျွန်ူးနိုင်ငံလေးရဲ့ ကောင်းကင်မှာ ပျံဝဲနေဆဲဆို တာတွေ့လိမ့်မယ်။
လိပ်ပြာ ၃ ကောင် ဘယ်လိုနည်းနဲ့ သူတို့ ဤကမ္ဘာမြေက စွန့်ခွာခဲ့ရသလဲ။
၁၉၆၀ နိုဝင်ဘာ ၂၅ မိုး တည၊ Victoria Penitentiary in Santo Domingo ဆန်ဒို ဒိုမင်ဂိုမှာရှိတဲ့ ၀ိတိုရိယ အကျဉ်း ထောင်ထဲက ခင်ပွန်းတွေစီ ညီအမ ၃ ယောက် ထောင်ဝင်စာသွားတွေ့ကြတယ်။ ညနေဖက် အိမ်အပြန်တောလမ်းမှာ သူရဲကာင်း ညီ အမ ၃ယောက်စလုံး တပြိုင်နက်လုပ်ကြံခံရတယ်။ သူတို့ညီအမတွေရဲ့ခင်ပွန်းတွေ နိုင်ငံရေးကြောင့် ထောင်ထဲရောက်နေကြတယ်။ ထောင်ကနေသူတို့နေတဲ့ မြို့ကိုပြန်လာတဲ့အခါ လူသွားလူလာနည်းတဲ့ တောလမ်းလေး မှာ သူတို့ စီးလာတဲ့ကားကို ထျူဇီဂျို ၏ စစ်ထောက်လှန်းရေး လက်မရွံ့လူသတ်သမားများကတားပြီး ညီအမ ၃ ယောက် နှင့် ကားမောင်းသူကို ကားရပ်ခိုင်းပြီး ဆင်းခိုင်းပါတယ်။ ပြီးတော့ အနီးအနားက ပြောင်းဖူးခင်းထဲသို့လူခွဲပြီး ခေါ်သွားပါ တယ်။အဲဒီ့ညမှာပဲ သူတို့ ၄ ယောက်ကို ဒုတ်တွေနှင့် မသေမချင်း ရက်ရက်စက်စက် ရိုက်သက်ခဲ့ပါတယ်။ မာရီဘဲလ် ညီ အမလေးယောက်မှာ နံပါတ် ၂ ဖြစ်တဲ့ ဒီးဒီး တယောက်ပဲ နိုင်ငံရေးသိပ်မလုပ်လို့ သကံမရောက် သက်မပျောက် ကျန်ရစ် ခဲ့ပါတယ်။ ဒါတောင် သူမက အဲဒီနေ့က သူတို့နဲ့ လိုက်မသွားဖြစ်ပါတယ်။ ထိုညမှာ ဒီးဒီးလည်း သူ့အမနဲ့ ညီမတွေစီးတဲ့ ဂျစ်ကားလေးပေါ်မှာ ရှိနေခဲ့ရင်၊ ဒီ ကံဆိုးမိုးမှောင်ကျတဲ့အဖြစ်ဆိုးက သူမ ဘယ်လိုနည်းနှင့်မှ လွတ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ သူမလဲပဲ ကားဒရိုင်ဘာလို သူ့ အမ ညီမလေးတွေနဲ့အတူ ပြန်လမ်းမရှိတဲ့ တခရီးထဲ သွားခဲ့ရမှာပါ။
အာဏာရှင် ရာဖဲထျူဇီဂျိုရဲ့ အစီအစဉ်က ဒီလိုပါ၊ သူတို့ရိုက်သတ်ထားတဲ့ လူ ၄ ယောက်ကို သတ်ပြီး အလောင်းတွေကို စီးလာတဲ့ ဂျစ်ကားထဲ ပြန်ထဲ့ပြီး ကျောက်ကမ်းပါးက ပြစ်ချလိုက်တယ်။ ကားမှောက်ပြီးသေတဲ့ပုံမျိုး ဖြစ်ကတတ်စမ်း လုပ် ပြစ်ခဲ့တယ်။ ကြေမွနေအောင်ခေါင်းကို ထုရိုက်တာခံခဲ့ရတဲ့ ညီအမ ၃ ဦး၏ ကြေကွဲဖွယ်ဇာတ်လမ်းက ဒိုမေရိကန် ကျွန်း နိုင်ငံလေးမှာ ရာသက်ပန် ရှင်သန်နေဆဲ သူရဲကောင်းပုံပြင်တပုဒ် ဖြစ်တယ်။ အာဏာရှင် ထျူဇီဂျို လက်အောက်က လွတ်မြောက်ဖို့၊ သူတို့မိသားစုတခုလုံး ပေးဆပ်ခဲ့ကြတယ်။
ဒေသမှာထင်ရှားတဲ့ မီရာဘဲလ် မိသားစု
မီရာဘဲလ် ညီအမတွေဟာ ချမ်းသာပြီး အထက်တန်းလွှာလို့ခေါ်နိုင်တဲ့ မိသားစုမှာ ကြီးပြင်းခဲ့သူများဖြစ်တယ်။ ဖခင် အင်ယူးကီက ကျွန်းမြောက်ပိုင်းက ဆဲစီဒိုဆိုတဲ့ မြို့မှာ ချမ်းသာလို့ လျှမ်းလျှမ်းတောက် နံမည်ကြီး တဲ့ မိသားစုကဖြစ် တယ်။ မြို့တော် ဆန်ဒီရေဂိုနဲ့ မနီးမဝေး တန်ဘိုရီဆိုတဲ့ တောမြို့လေးမှာ ချမ်းသာအောင်မြင်တဲ့ လယ်လုပ်ငန်းပိုင်ရှင် တဦးဖြစ်တယ်။ မိခင် မာဆေးဒီးကလည်း ကြွယ်ဝတဲ့ လူလတ်တန်းစားမိသားစုက ဆင်းသက်လာသူ ဖြစ်တယ်။ ဖခင်က ဆန်စက်၊ ကော်ဖီကြိတ်စက်၊ လယ်ယာမြေ၊ များစွာနဲ့တကွ အသားဈေး၊ ဆန်ဒိုင်ကြီးတွေ ပါပိုင်ဆိုင်ထားတယ်။ ငွေကြေး ပြည့်စုံတဲ့ မလိုင်လို့ခေါ်လို့ရတဲ့ မိရာဘဲလ် မိသားစုမှာ ကြင်နာမှု၊ အဆင့်မြင့် ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ အသိဉာဏ်ရှိတယ်။ ဖခင်က သမီးတွေအားလုံးကို အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ ကျောင်းကောင်းတွေမှာထားတယ်။ မိသားစုမှာ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ တွေသာမက၊ စီးပွား၊ စာပေယဉ်ကျေးမှု။ ဂိတကို မြတ်နိုးမှု ဒီတန်ဖိုးတွေနဲ့ ဖုံးလွှမ်းနေတယ်။ သူတို့ အိမ်မှာ ကျောင်းပိတ်ရက်တွေ ဆို ရင်၊ အသွင်တူ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ မြိုင်နေတယ်။ စကားဝိုင်းတွေလုပ်တယ်။ ပါတီတွေပေးတယ်။ ဒီတော့ သူတို့ အိမ်ဟာ ဂီတသံ စာသံကဗျာသံ၊ စားစရာတွေ မိတ်ဆွေတွေနဲ့ ပြည့်စုံနေပါတယ်။ စိတ်ကောင်းရှိ ရုံတင်မက၊ မွန်ရည် အဆင့်အ တန်းရှိတဲ့၊လူတန်းစားမခွဲခြားတတ်တဲ့ မီရာဘဲလ် မိသားစုကို မြို့ကလူတွေ ကပါ အားကျ ချစ်ခင်ကြတယ်။
ပထမသမီး ပက်ထရီရှာ ၁၉၂၄-၁၉၆၀ (တတိယလိပ်ပြာ)
ဖေဖေါ်ဝါရီ ၂၇ ၁၉၂၄ မှာ ဒိုမေနီကန်ရီ ပတ်ဘလစ် နိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးနေ့မှာ မွေးတယ်။ ပက်ထရစ်ရှာဆိုတဲ့ အဓိပ္ပယ် က အဖနိုင်ငံတော်လို့ဆိုတယ်။ အကြီးမ ပက်ထရစ်ရှာက ပုံဆွဲပန်းချီရေးဝါသနာပါတယ်။ သူမ အသက် ၁၄ နှစ် အရွယ် မှာ လာဗာဂါ အရပ်က ကက်သလစ်ကျောင်းမှာ အိပ်ကျောင်းစား သွားနေရတယ်။ သူမ က အနေအေးဆေးတယ်။ ရွေး ချယ်ခွင့်ရှိရင် အိမ်ရှင်မပဲလုပ်ချင်တယ် ဆိုတဲ့သူမျိုး။ သိမ်မွေ့ပြီး ဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းတယ်။ ငယ်ငယ်ကဆို သီလရှင် လုပ်ချင်တယ်လို့ပြောတတ်သူ ပက်ထရီရှာဖြစ်တယ်။ ဒါပေမဲ့သူမ ငယ်ငယ် ရွယ်ရွယ်နဲ့ အိမ်ထောင်ကျခဲ့တယ်။
ခင်ပွန်းက သူတို့ အရပ်မှာပဲတွေ့တဲ့ လယ်သမားတဦးပဲ။ ပျော်ရွှင်နေသော အိမ်ရှင်မဖြစ်ပြီး ဒါပေမဲ့ ၁၉၅၅ နောက်ပိုင်းမှာ သူမရော သူမ၏ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ပါ ထျူဇီဂျိုရဲ့ ကြမ်းကြုတ်ရက်စက်လွန်းတဲ့ စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကို သတ္တိရှိရှိ ဆန့်ကျင်ခဲ့ကြ တယ်။ ၁၉၅၉ ဂျွန်လ မှာ ခရမ်းရောင်တောင်တန်းများလို့ အမည်ရတဲ့ ကွန်စတန်ဇာတောင်ပိုင်းကို သူမ ရောက်ခဲ့တယ်။ အာဏာရှင် ထျူဇီဂျို၏ လက်မရွံ့စစ်သားတွေ ရဲတွေက လူငယ်ကလေးတွေကို သတ်ဖြတ်တာ ကိုယ်တိုင်မြင်ပြီး ကတည်းက ပက်ထရစ်ရှာဟာ နောက်မဆုတ်တော့ဘဲ ပိုရဲရင့်တက်ကြွလာခဲ့တယ်။ သူမ အသတ်ခံရပြီးနောက် သားသ မီး ၄ ယောက် ကျန်ခဲ့တယ်။ သူမ ပြောလေ့ရှိတဲ့စကားတခွန်း ရှိတယ်။
ဒီလောက်ခြစားပျက်ဆီးနေပြီး ဒီလောက် ရက်စက်ရိုင်းစိုင်းတဲ့ အာဏာရှင်လက်အောက်မှာ ကလေးတွေကို ကြီးပြင်းလူ ဖြစ်ခွင့်ပေးလို့ မရနိုင်ပါ။ ဒီတော့ ရတဲ့နည်းသုံးပြီး တော်လှန်ဆန့်ကျင်ရလိမ့်မယ်။ ကျမ ဘက်ကတော့ အသက်ပင်မက အရာရာပေးဆပ်ဖို့ ပြင်ဆင်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ ပက်ထရစ်ရှာ ပြောခဲ့တယ်။ သူမပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း ဒီ အာဏာရှင်က သူမရဲ့ အသက်ကို ၁၉၆၀ နိုဝင်ဘာ ၂၅ နေ့မှာ အကြမ်းဖက်ပြီးယူခဲ့တယ်။
ဒုတိယသမီး ဒီးဒီး ၁၉၂၅- လက်ရှိ အသက်ရှင်နေဆဲ မူလက ညီမ မီနာ ကို ထောက်ခံပြီး နိုင်ငံရေးထဲ ၀င်ပတ်သက်ခဲ့ တယ်။
Dede Mirabal မသေဘဲ ကျန်ခဲ့သူ
ဒါပေမဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ သူမခင်ပွန်းက အားမပေးတာနဲ့ ကလေးတွေနဲ့ မိသားစုမျက် နှာထောက်ပြီး ခပ်အေးအေးနေခဲ့ တယ်။ ကျန်တဲ့ညီအမ ၃ ယောက်လောက် မပြင်းထန်တဲ့အတွက်၊ နောက်တချက်က နိုဝင်ဘာ ၂၅ ညမှာ၊ အသတ်ခံရမဲ့ သူတွေနဲ့ ကားတစ်စီးထဲပေါ်မှာ ရှိမနေတဲ့အတွက်ကြောင့် အသက်ရှင်ခွင့်ရခဲ့တယ်လိုပဲ မှတ်ယူနိုင်ပါတယ်။ ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ ဒီးဒီး က ခု မာရီဘဲလ် လိပ်ပြာတို့နောက်ဆုံး ၉ လ နေခြ.တဲ့ တော အိမ်လေးကိုမွမ်းမံပြီး အထိမ်းအမှတ် ပြတိုက်ဖွင့်ထား ပါတယ်။ ပြတိုက်ကို ဦးစီးစောင့်ရှောက်နေပါတယ်။ ညီအမတွေ လုပ်ကြံခ့ရပြီးတော့ သေသွားတဲ့ ညီအမ ၃ ယောက်က စုစုပေါင်း မိတဆိုးကလေး ၆ယောက်၊ ကျန်ရစ်လေတော့၊ သူ့ သားအရင်း ၃ ယောက် စုစုပေါင်းက ၉ ယောက် ကို ပြုစု ပျိုးထောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ နံပါတ် ၁ အမကမွေးတဲ့ သမီးတယောက်က ခုထိ နိုင်ငံရေးအရ ထက်ထက်မြက်မြက် ရှိနေပြီး လက်ရှိ ဒိုမေနိကန်က အောက်လွှတ်တော်မှာ နိုင်ငံရေးတာဝန်တွေ ထမ်းဆောင်လျက်ရှိပါတယ်။
နို့ညှာသမီး မီနာဗာ ၁၉၂၆ -၁၉၆၀ (ပထမလိပ်ပြာ)
မီနာက အမ ပက်ထရီရှာထက် ၂ နှစ်ငယ်တယ်။ ညီ အမ ၄ ယောက်ထဲမှာ အထူးချွန်ဆုံး၊ အသွက်ဆုံး၊ အလှဆုံး၊ ခေါင်ဆောင် ဖြစ်နေတဲ့ လိပ်ပြာ မယ်လေးလို့ပြောရင်ရမယ်။
မီနာဗာ လိပ်ပြာတို့၏ခေါင်းဆောင် အသက်ငယ်ငယ်လေး ကတည်းက သူမတူတဲ့ဉာဏ်ရည်နဲ့ နေပုံထိုင်ပုံ စရိုက်ရှိတယ်။ ၇နှစ်သမီး အရွယ်မှာ ပြင်သစ်လို ကဗျာတွေ တဂျောင်းဂျောင်း ရွတ်နိုင်နေပြီ။ အနုပညာကို သိပ်ခုံမင်တယ်။ သူမ ၀ါသနာပါတာက စာဖတ်၊ စာရေး၊ ကဗျာ ဖတ်တဲ့။ ပက်ဘလို နယူးဒါ ကဗျာတွေကို အလွတ်ရပြီး အထူးခုံမင်နှစ်သက်သူ။ အမ ပက်ထရီရှာတက်တဲ့ ကက်သလစ် ဘော်ဒါ ကျောင်းမှာပဲ တက်ခဲ့တယ်။ ဆန်တိုဒိုမင်ဂိုဆိုတဲ့ တက္ကသိုလ်မှာ သူမ အစိုးရဆန့်ကျင်ရေးတွေကို တချိန်ခင်ပွန်း ဖြစ်လာမဲ့အတူ မရပ်မနားလုပ်တယ်။ ရီးဇားဖြစ်သူနဲ့ ၀ါသနာတူ အကျင့်တူ။ ၁၉၄၉ ခုနှစ်မှာ သူတို့မိသားစု တခုလုံး ထျူ ဇီဂျို ကဒုက္ခပေးခဲ့တယ်။ အဖေကို ထောင်ထဲ့ခဲ့တယ်။ မိခင်နဲ့ မီနာက အိမ်မှာ အပြင်ထွက်ခွင့်မရှိ အကျယ်ချုပ်ကျနေ တယ်။ ခင်ပွန်းလောင်းကလည်း ခွေးပြေးဝက်ပြေး တိမ်းရှောင်နေရတယ်။ ၁၉၅၅ မှာ သူ့ ချစ်သူနဲ့လက်ထပ်ပြီး သူမ အ သတ်ခံရတဲ့အချိန်မှာ ခင်ပွန်းကထောင်ထဲမှာ။ သူမ မရှိတောတဲ့နောက်မှာ လူမမယ်ကလေး ငယ် ၂ ယောက်ကျန်ခဲ့ တယ်။
မီနာက သူတို့ ကျောင်းသား ပညာတတ်တွေကြားမှာ ရဲရဲတောက် အဖြစ်ဆုံးမို့ ထျူဇီဂျိုက သူမကို ပစ်မှတ် နံပါတ်တစ် အနေနဲ့ အမျက်ပိုထားတယ်။ မြို့တော်က ဧည့်ခံပွဲတခုမှာ အာဏာရှင် ထျူဇီဂျိုကို မီနာဗာက သူမ ဥပဒေကျောင်းသူဘ၀ နဲ့ မင်းပွဲစိုးပွဲတခုတက်ရင်းက ကြုံတုန်း အရှက်ခွဲခဲ့သေးတယ်။ ကြုံတိုင်း ထျူဇီဂျိုက မီနာဗာကို လိုချင်လို့ ချဉ်းကပ်တယ်။ ဖခင်ကိုထောင်ချလည်း မီနာက မမှုဘူး၊ သူမကိုထောင် အကြိမ်ကြိမ်ချလည်း သူမက လုံးလုံး အညံ့မခံဘူး။ ထျူဇီဂျိုက လည်း တေးထားမှတ်ထားတယ်။ သူ၎ ကြိမ်တိုင်တိုင် ထောင်ချ၊ပက်ပက်စက်စက် နှိပ်စက်ခဲ့သည့်တိုင် သူဘယ်လို ချိုး ချိုး လုံးလုံးမကျိုးနိုင်တဲ့ မီနာ၏ စိတ်ဓါတ်နဲ့ လှုံ့ဆော်မှုတွေကို ထျူဇီဂျိုက တနေ့တခြား လန့်သထက်လန့်လာတယ်။
၁၉၅၈ နောက်ပိုင်းမှာ သူလူရင်းတွေကို ဒီအာဏာ ရှင်က ထုတ်တောင်ပြောဖူးလေသတဲ့။ ဒီတိုင်းပြည်မှာ ငါက အားလုံး အပေါ်နိုင် ချင်တိုင်းနိုင်လို့ရတယ်။ ဒါပေမဲ့၊ ကက်သလစ် ချာ့ခ်ျတွေနဲ့ မီနာဗာကိုပဲ ငါလန့်ရတာကွ လို့ သူ့လူတွေကို ပြော ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ မှတ်တမ်းတွေကျန်ခဲ့တယ်။ မီနာ၏ အရှိန်အဟုန်ကလဲ မသေး။ ဒိုမေနိကန်ကတဆင့် တခြားလက်တင် အမေရိက က မြေအောက်လှုပ်ရှားမှုတွေ၊ ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေ နားအထိ သူမ သတင်းကရောက်တယ်။ ၁၉၄၉ နောက် ပိုင်းမှာ ဒိုမေနီကန် တနိုင်ငံလုံး ဘယ်သွားသွား ရဲရင့်တောက်ပြောင်လွန်းတဲ့ မီနာ့နဲ့ သူမ၏ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေက တောပိုင်းတွေအထိ စိမ့်ဝင်နေပြီ။ လိပ်ပြာဆိုတဲ့ လျှို့ဝှက် သင်္ကေတကို မီနာဗာက ပဲ ရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ သူဦးဆောင်တဲ့ မြေအောက်အဖွဲ့တွေကြားမှာ သူမကို လိပ်ပြာလို့ပဲ အားလုံးကခေါ်ဝေါ် သတ်မှတ်ထားကြတယ်။ထျူဇီဂျိုက တားမြစ်ထား လို့ သူမခင်မြာ၊ ဥပဒေနဲ့ ဘွဲ့ရပေမဲ့ ရှေ့နေလုပ်ခွင့်လိုင်စင် မရခဲ့၊ ဥပဒေကျောင်းသူအနေနဲ့ သူမတင်ခဲ့တဲ့ စာတမ်းခေါင်း စဉ်က နိုင်ငံအုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေကြောင်းရာနှင့် တရားစီရင်ရေးကဏ္ဍ ကူးလူးဆက်သွယ်ချက်လို့ အမည်ရပါတယ်။ ဒီခေါင်း စဉ်ကြောင့် ထျူဇီဂျို က ယမ်းပုံမီးကျဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ မီနာဗာ ထောင်အကြိမ်ကြိမ်ကျခဲ့ရခြင်းမှာ သူမရဲ့ အကြောက်အလန့် မရှိ ဖီဆန်ပုံတွေကြောင့် ထျူဇီဂျို အကြိမ်ကြိမ်အရှက်ကွဲခဲ့ရတဲ့တကြောင်းလဲ ပါဝင်ပါတယ်။
မီနာဗာ က ကျူးဘားက တော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင် ကက်စထိုကို လေးစားတယ်။ ကက်စထျို၏ မြေသားဆန်ဆန် လူ ထုနဲ့နီးတဲ့ ဦးဆောင်မှုက သူမရဲ့ကျာင်းသား လူငယ်ဘ၀မှာ ကြီးစွာလွှမ်းမိုးထားတယ်။ ကက်စထျိုရဲ့ နံမည်ကြီး စကား တခွန်းကိုပါ သူမက မကြာခဏကိုးကားပြီး မိန့်ခွန်းတွေတက်ပြောတယ်။ စာရွက်တွေဝေတယ်။ တရားဟောတယ်။ သ မိုင်းက ကျုပ်ကိုမကြိုက်လို့ ကျုပ်အမည်ကို အရေဖျော်လိုက်ရင်တောင် ရသေးတယ်၊ ကျုပ်ကိုပဲ ရှုံချမပြစ်တင်ကြတဲ့။ သူမနှစ်သက်တဲ့ကက်စထျို၏ စကားများ။
တက္ကသိုလ်ရောက်တော့ ကျောင်းဝင်းထဲက မြေအောက်လှုပ်ရှားတဲ့ အဖွဲ့တွေကြား မှာအတက်ကြွဆုံး၊ သဘောတရားအ ရ ခေါင်းဆောင်မှုအပေးနိုင်ဆုံး သူတယောက်ဖြစ်တဲ့ မီနာနဲ့ ဆုံဖူးတဲ့သူတွေက သူမ ပြောခဲ့တာတွေကို ဘယ်လိုမှ မမေ့ နိုင်ကြဘူး။ ဒီလောက် ကြေကွဲစရာ၊စိတ်ထိခိုက်စရာတွေများတဲ့နိုင်ငံမှာ မိမိတိုင်းပြည် အတွက် တတ်နိုင်တဲ့ တစုံတခု လုပ်ဆောင်ပေးခြင်းဖြင့်သာ မိမိ အတွက် ပျော်ရွှင်ကျေနပ် မှုရစေတယ်။ ဘာမှ မလုပ်ဘဲ လက်ပိုက်ထိုင်ကြည့်နေရမယ် ဆိုတာ ၀မ်းနည်းဖို့ကောင်းလွန်းတယ်လို့ ပြောတတ် လှုံဆော်တတ်တဲ့ လိပ်ပြာလေးကို လွမ်းကြ အမှတ်ရကြတယ်လို့ ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ ရဲဘော် တော်လှန်ရေးသမားတွေက ပြောတယ်။
အငယ်ဆုံးသမီး မာရီယာ။ ၁၉၃၅-၁၉၆၀ (ဒုတိယလိပ်ပြာ)
အသတ်ခံရသော အချိန်တွင် သူမ က ၂၄ နှစ်သာ ရှိပါသေးတယ်။ အမ မီနာတက်ခဲ့တဲ့ ဘော်ဒါကျောင်းထွက်၊ ပြီးတော တက္ကသိုလ်မှာ သင်္ချာနှင့် အင်ဂျင်နီယာပညာကို လေ့လာခဲ့တယ်။ အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေး မြေအောက်နိုင်ငံရေးထဲ ပါ ၀င်လာတဲ့ အဓိကအကြောင်းက အမလတ်ဖြစ်သူ မီနာ့ကိုကြည့်ပြီး အထင်ကြီးအားကျရာက စတယ်။ အမအတွက်ဂုဏ် ယူတယ်။ အမကို ကူညီပေးရင်း သူမကိုပါ ထျူဇီဂျိုက ခြေမှုန်းရမဲ့ စာရင်းထဲ ထဲ့ခဲ့တယ်။ ၁၉၆၀ သူမတို့ ညီအမတွေ အ သတ်ခံရမယ့်နှစ်မှာ မီနာနဲ့ မာရီယာကို ထောင် ၅ နှစ်ထပ်ချလိုက်ပြန်တယ်။ အယူခံဝင်ခဲ့တဲ့ အတွက် ၅ နှစ်က ၃ နှစ်ကို လျှော့ချပြီးပါမှ၊ အသတ်ခံရမယ့် နိုဝင်ဘာ မရောက်ခင် ၃ လ အလိုမှာ ညီ မ ၂ ယောက်စလုံးကို ထောင်က လွှတ်ပေးခဲ့ ပါတယ်။ ထောင်ထဲမှာသတ်ရင် လက်စဖျောက်ရမှာ ခက်ခဲနိုင်တဲ့အတွက် လွှတ်ပေးပြီးမှ ၂ လ အကြာတော လမ်းမှာ လူမိုက်တစုနဲ့ ထျူဇီဂျို ၏ အထူးတပ်ဖွဲ့ လူယုံများက အစီအစဉ်ရှိရှိ လုပ်ကြံခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။ မာရီယာ အသတ်ခံရတဲ့ အ ချိန်မှာ အသက် ၂ နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ ဂျက်ကလင်း လို့ခေါ်တဲ့ လူမမည် သမီးလေးတယောက် ကျန်ခဲ့ပါတယ်။
ကျမ သေရမှာ မကြောက်ဖူးနော်။ တိုင်းပြည်အတွက် အလုပ်လုပ်ရင် သေဖို့နီးစပ်တယ်။ တကယ်တမ်းကျမတို့နဲ့ အနီးဆုံး ဆိုတဲ့ တရားသဘောက သေခြင်းပဲ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။ တရားမျှတမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်စေဖို့ ဆက်တိုင်ပွဲဝင်ရမှာပဲလို့ ပြောတတ်လေ့ရှိတဲ့ လိပ်ပြာမယ်လေး မာရီယာ ၏ အသက်ကို လက်မရွံ့လူသတ်သမားတွေက ဒုတ်ဒါးတွေသုံးပြီး လွန် ခဲ့တဲ့ ၅၂ နှစ် နိုဝင်ဘာ ၂၅ ရက် ၁၉၆၀ မှာ မရအရ ယူခဲ့ပါတယ်။
သေပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း အောင့်မေ့ဘွယ်အခမ်းအနားလုပ်ကြတဲ့အခါ၊ ကျန်ရစ်တဲ့မိသားစုတွေက (နံပါတ် ၂ အမ ဒီးဒီး ဦး ဆောင်ပြီး) ပုလင်းကွဲစတွေ၊ သွေးတွေ၊ ဖုန်မှုန့်တွေ အလိမ်းလိမ်းကပ်နေတဲ့ သူမရဲ့ ကျစ်ဆံမြီးရှည်ကြီးကို သိမ်းဆီး ထားဖို့ ဆုံးဖြတ်ကြတယ်။ ပြီးတော့ သူမ အလောင်းက နောက်ဆုံးကျန်တဲ့ အမှတ်တရပစ္စည်းအနေနဲ့ ကျစ်ဆံမြီးရှည်ကို ဖြတ်ယူထားလိုက်ကြတယ်။
ဒီးဒီး Salcedo ဆယ်စီဒို မှာ ဖွင့်ထားသော မီရာဘဲဘ် ညီအမများ ပြတိုက်မှာ အငယ်ဆုံးမာရီယာ ၏ ကျစ်ဆံမြီးကို ပြ သထားတယ်လို့ ကြားပါတယ်။ သူတို့ညီအမတွေနောက်ဆုံး ၁၀ လ နေခဲ့တဲ့ အိမ်က ခု သူတို့ပြတိုက်ဖြစ်နေပါပြီ။ မီနာ့ အမျိုးသား မန်နို လည်း ၁၉၆၃ မှာ ထျူဇီဂျိုကို အာဏာကိုဆက်ခံတဲ့အဖွဲ့က လုပ်ကြံလို့ သေနတ်ပစ်ခံသေဆုံးခဲ့ရပါ တယ်။ ညီအမ ၃ ဦးနဲ့ မန်နို ထားတဲ့ သင်္ချိုင်းမှာပဲ မန်နို ကို သူ့ဇနီး မီနာဗာ အုတ်ဂူဘေးမှာ ဒီးဒီးက မြှုပ်နှံခဲ့ပါတယ်။ သူ တို့ ပြတိုက်ရှေ့က မြက်ခင်းမှာလည်း ကျဆုံးသွားတဲ့ ညီ အမ ၃ ဦး၏ကျောက်ရုပ်ထုများကို တွေ့နိုင်ပါတယ်။
မီရာဘဲလ် မိသားစု၏ နိုင်ငံရေးသမိုင်း (၁၉၄၀ နောက်ပိုင်းနှစ်များ)
ကာရစ်ဘီယန်ပင်လယ်က ဒိုမေနီကန် ကျွန်းနိုင်ငံလေးမှာမှာ အာဏာရှင် ရပ်ဖဲလ်ထျူဇီဂျို လက်ချက်နဲ့ ၁၉၆၀ နိုဝင်ဘာ ၂၅ ရက်နေ့မှာ အသက်ဆုံးရှုံခဲ့ရရှာတဲ့ သူရဲကောင်းမလေး ၃ ယောက်မှာ ပထမလိပ်ပြာလေး မီနာဗာ က အဓိကကျပါ တယ်။ သူဆွဲဆောင်ရာ မနေသာလို့ မိသားစုတခုလုံး စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးမှာ ရှေ့ဆုံးက မီနာနောက်ကို သစ္စာ ရှိရှိ လိုက်ပါခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်တယ်။ ဒီမိသားစုမှာ နံပါတ် ၃ ဖြစ်တဲ့ အထက်ဆုံးအရဲဆုံး မီနာဗာ၏ ဦးဆောင်နိုင်စွမ်း၊ သတ္တိနဲ့ သူမ တော်လှန်ရေးစိတ်ဓါတ်တွေက ငယ်ငယ်ကတည်းက ထင်ရှားခဲ့ပါတယ်။
ကွန်ဗင့်တက်နေတဲ့ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကတည်းက ကျောင်းနေဖက် သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ဆွေမျိုးတွေ မိဘတွေကို အာဏာရှင် ထျူဇီဂျို နှိပ်စက်ညှဉ်းပမ်းတဲ့ သတင်းတွေကြားတိုင်း သူမ လုံးဝမခံမရပ်နိုင်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ကောလိပ်တက် တော့လည်း ဦးလေးဖြစ်သူက သူမ၏မျိုးချစ်စိတ်၊ နိုင်ငံရေးထက်သက်မှုတွေကို ဆက်အားပေးတယ်။ တွဲမိတဲ့ ကျောင်း နေဖက် သူငယ်ချင်းတွေကလည်း မှန်ကန်ခဲ့တယ်။ လူထု ဆိုရှယ်လစ်ပါတီ၏ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာမဲ့ ပရီဆဲဖရန်ကိုနဲ့ ခင်မင်ပြီး သူ့သြဇာကို မီနာ သက်ဝင်ယုံကြည် သွားတယ်။ ဒိုမေနီကန်မှာ မတရားရေဒီယိုလိုင်းများဆိုပြီး တရားဝင် နား ထောင်လို့မရတဲ့ ကျူဘားနဲ့ ဗင်နီဇွဲလားက ရေဒီယို ချန်နယ် ၂ ခုကိုလည်း မီနာက အမြဲနားထောင်တယ်။ တချန် သူမ ယူဖြစ်မဲ့ ချစ်သူကိုလည်း ကောလိပ်မှာ တွေ့ခဲ့တယ်။ မြေအောက်လှုပ်ရှားမှုတွေ အတူတူလုပ်ခဲ့ကြတယ်။
၁၉၄၂ အာဏာရှင် ထျူဇီဂျိုက အရပ်က က သူ့ စံအိမ်တော်မှာ ခန်းနားထည်ဝါတဲ့ ကပွဲကြီးပေးတယ်။ မာရီဘဲလ်တို့ မိ တင်းနေတဲ့သားစုကလည်း ဒေသမှာ ကြေးရေတတ် မျက်နှာဖုံးတွေဆိုတော့ ကပွဲတက်ဖို့ ဖိတ်ကြားတာခံရတယ်။ အဖေ၊ အမေ၊ အိမ်ထောင်ကျနေပြီဖြစ်တဲ့ အထက်က အမ ၂ ယောက်၊ သူတို့ခင်ပွန်း၂ယောက်နဲ့အတူ ဒီပွဲကို မီနာဗာ တက်ခဲ့ တယ်။ ၁၇ နှစ် အရွယ် လှချင်တိုင်းလှ၊ ကပွဲမှာ အလှဆုံး ကျောင်းသူလေး မီနာကို ထျူဇီဂျိုက မျက်စိကျသွားတယ်။ သူမတို့ မိသားစုကတော့ အာဏာရှင်ကြီးကို မျက်နှာလုပ်ဖို့ဝေးစွ၊ ဒီဖန်စီ ကပွဲကြီးက ဘယ်လိုထွက်ပြေးရမလဲလို့ပဲ အကြံထုတ်နေကြတယ်။ ရုတ်တရက် ပွဲသဘင် တန်းလို့တန်းလန်းနဲ့ပဲ မိုးကြီးလေကြီးတွေကျလာ။ မီး ခဏပြတ်သွား၊ ဒါကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး မာရီဘဲလ်မိသားစုက သူတို့ ရွံရှာမုန်းတီးတဲ့ ထျူဇီဂျို၏ ညစာစားပွဲကြီးကို အဖြစ်တက်ပြပြီး၊ ပွဲမပြီးခင် နောက်ဖေးပေါက်ကထွက် ၊ဒီနည်းနဲ့ အာဏာရှင်ကြီးကို ကြီးစွာအရှက်ရစေတယ်။
ထျူဗီဂျိုက မောက်မာ ဘ၀င်မြင့်ခက်ထန်သူဖြစ်တယ်။ ပါတီကပွဲ မပြီးခင်ထွက်သွား တဲ့မိသားစုက သူ့ကို စော်ကားတာပဲ သူ့သိက္ခာကျအောင် တမင်လုပ်သွားတာပဲဆိုပြီး သူ့လူတွေလွှတ်ပြီး နောက်က လိုက်ခေါ်တယ်။ စစ်ထောက်လှမ်းရေး တွေက လမ်းတွေဂိတ်ပေါက်တွေက ဆီးပိတ်ဖမ်းဖို့ကြိုးစားပေမဲ့ နောက်ကျသွားတယ်။ သိပ်လှတဲ့ ၁ရ နှစ် သမီး မီနာကို လည်း၊ အကြီးအကျယ် သဘောကျသွားပေမဲ့ ဒီ မိသားစုကို ငါ့အကြောင်းသိရစေမယ်လို့ သူ့စိတ်ထဲမှာ တေးထားတယ်။ သူမကို ချိုးချင်တာ တပိုင်း။ သူမ အလှနဲ့ငယ်ရွယ်မှုကို မက်မောတာကတပိုင်း၊ ယုတ်ညံ့တဲ့နည်းတွေနဲ့ ကြိုးပမ်းတော့ တယ်။ ဖခင်ကိုဖမ်းတယ်။ စစ်ပလိပ်တွေက မီနာကို ခေါ်စစ်တယ်။ ပြည်နယ်က လွှတ်တော် အမတ်က မီနာတို့ အိမ် ရောက်လာပြီး ထျူဇီဂျို ကျေနပ်သွားအောင် တောင်းပန်စာရေးရမယ်လို့ဆိုတယ်။ ဖခင်ကြီးက ရှောင်ရင် မလွတ်နိုင်လို့ နောက်တနေ့မှာ တောင်းပန်စာတစောင် ရေးပြီးပို့ခဲ့သည်တိုင် အာဏာရှင်ပေးတဲ့ဒုက္ခတွေက သူတို့ မိသားစု မလွတ်ခဲ့ပါ။ မိနာဗာ ၁၇ နှစ်သမီး ကတည်းက သူမ ကို မျက်စိကျခဲ့တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟာ မီနာဗာ ကို လုံးလုံး မရခဲ့ပဲ ၊ သူမ ဦးဆောင် တဲ့ မြေအောက် ဒိုမေနီကန်လှုပ်ရှားမှုတွေကြောင့်သာ နောက်ဆုံး သူ့ အာဏာစက်လည်း အပိုင်းပိုင်းကျိုးခဲ့ရပါတယ်။
မီနာဗာ၏ ကဏ္ဍ၊ နှင့် ဂျွန် ၁၄ ရက် လူပရင် ၁၉၅၉ ထိုးစစ်တိုက်ပွဲ The June 14th Luperion Invasion
ဒိုမေနိကန်လွတ်မြောက်ရေး မြေအောက်တပ်ဖွဲ့က ထျူဇီဂျိုကို ဂျွန် ၁၄ ၁၉၅၉ မှာ မြောက်ပိုင်း ကမ်းရိုးတမ်းဖက်ကစပြီး ၀င်တိုက်ခဲ့ပါတယ်။ ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပါတယ်။ စစ်ရေးအရ မအောင်မြင်ခဲ့သော်လည်း ဒိုမေနီကန် နိုင်ငံတခုလုံးမှာ ထျူဇီဂျိုကို အ ပြုတ်မတိုက်ရင် မရတော့ဘူးလို့ ခိုင်မာပြင်းထန်တဲ့တော်လှန်ရေးမျိုးစေ့ကို ဒီလူပရင် တိုက်ပွဲက ထားပစ်ခဲ့ပါတယ်။ ကျူ ဘားတော်လှန်ရး သမားတွေနောက်ကွယ်က ကူညီပေးတဲ့ ဒီလှုပ်ရှားမှုကို ထျူဇီဂျို ၏ စစ်တပ်နဲ့လေတပ်က လက်ဦးမှု ယူပြီးဖြိုခွင်းခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ၁၉၅၉ ဂျွန် လနာက်ပိုင်းမှာ စစ်ထောက်လှန်းရေးတွေက အဖမ်း အဆီးတွေ တိုးလုပ်လာ သည့်တိုင် မီနာဗာတို့ မိသားစုရဲ့ အကြောက်အလန့်မရှိ ထိပ်တိုက်တိုးတဲ့ စတိုင်နဲ့နိုင်ငံရေး ဦးဆောင်မှုတွေက ပျံ့နှံ့ တယ်။လူပရင် ထိုးစစ်ရဲ့နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ၁၉၆၀ နှစ်ဆန်းမှာ မီနာနဲ့ မာရီယာတို့ ထပ်မံဖမ်းဆီးခံရ အနှိပ်စက်ခံရပါ တယ်။
မီနာ့ ယောက်ကျား မန်နို Manolo (Manuel Tavarez)၊ မာရိယာ ယောက်ကျား လင်ဒရို Leandro Guzmán တို့က ဂျွန် ၁၄ လူပရင် ၁၉၅၉ တော်လှန်ရေး၏ နောက်က အဓိကနေရာက ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်လို့ အဖမ်းခံရတယ်။ အကြမ်းဆုံး အဆိုးဆုံးဆိုတဲ့ ၀ိတိုရိယအကျဉ်းထောင်မှာ ခင်ပွန်းတွေကိုထားတယ်။ နံပါတ် ၁ အမ ပက်ထရစ်ရှာ ၏ယောက်ကျားပါ အဖမ်းခံရတယ်။ လူပရင် ထိုးစစ်ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပေမဲ့ ဒေသအတွင်းမှာ လက်နက်ခဲယမ်းမီးကျောက်တွေကို သူတို့မိသားစုနဲ့ အတူ အခြားမြေအောက် အုပ်စုတွေက စ စုဆောင်းလာကြပြီ။ အသတ်မခံရခင် ၃ လအလိုမှာ မီနာနဲ့ မာရီယာကို ထောင်က လွှတ်ပေးလိုက်တယ်။ တနိုင်ငံလုံးက ကက်သလစ် ဘုန်ကြီးတွေက ဒီညီအမနဲ့ အခြား မြို့ပေါ်ကပညာတတ် လူလတ်တန်းစား လူငယ် ၁၀၀ ကျော်ကို ဖမ်းဆီးအရေးယူခဲ့မှုကို ၁၉၅၉-၁၉၆၀ နှစ်တွေမှာ အပြင်းအထန် ရှုံ့ချခဲ့တယ်။ ဒီဖိအားတွေကို ၁၉၆၀ တနှစ်လုံး ထျူဇီဂျို မခံမရပ်နိုင်အောင်ဖြစ်လာတဲ့အတွက် လူတွေကို လှည့်စားနှစ်သိမ့်ဖို့ မိန်းက လေး နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကို ဟန်ပြလွှတ်ပေးလိုက်တယ်။ ပြီးမှ လိပ်ပြာတို့တပ်ဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် မိန်းကလေးများကို အသေသတ် ချေမှုန်းခဲ့ဟန် ရှိပါတယ်။
၁၉၆၁ မေ ၃၀ အာဏာ ရှင် ရာဖဲထျူဇီဂျို၏ ဇတ်သိမ်း
နှစ် ၃၀ အာဏာရှင် ဖြစ်ခဲ့တဲ့ လမ်းကြောင်းမှာ၊ ၁၉၅၉ အထိ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုနဲ့ သင့်မြတ်ခဲ့တယ်။ ဗင်နီဇွဲလား နဲ့ ကျူဗန်းနိုင်ငံက ခေါင်းဆောင်တွေကို အမေရိက အားကိုးနဲ့ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ရှုံချတတ်တယ်။ သူ့ဟာ တိုင်းပြည် ၀င် ငွေတွေကို အလွဲသုံးစားလုပ်ပြီး စစ်တပ်က အရာရှိကြီးတွေနဲ့ သူ့အိပ်ဆောင်တပ်ဖွဲ့ စစ်ထောက်လှန်းရေးအုပ်စုကို အထူး အခွင့်အရေးတွေပေးခဲ့တယ်။ ၁၉၃၇ မှာ အနောက်ဖက်ခြမ်းက အိမ်နီးချင်း ဟေတီနိုင်ငံက ၀င်လာအလုပ်လုပ်သူတွေကို ပါစလီ လူသတ်ပွဲလို့ အမည်တွင်ရတဲ့အထိ သွေးချောင်းစီးအောင်၊ ပြင်းပြင်းထန်ထန်နှိပ်ကွပ်ခဲ့တယ်။ အသားရောင် မှောင်မဲနေတဲ့ အာဖရီကန် နွယ်ဖွားဟေတီ အလုပ်သမားတွေကို အကြမ်းဖက်ပြီး နှိမ်နင်းတဲ့အခါ လူပေါင်း ၂၀၀၀၀ ကျော် ၃၀၀၀၀ ခန့် သေဆုံးတယ်လို့ ခန့်မှန်းကြတယ်။
၁၉၆၀မှာ ဗင်နီဇွဲလားက ခေါင်းဆောင်ကိုလုပ်ကြံဖို့လည်း သူက ၀င်စွက်ဖက်ခဲ့သေးတယ်။ ကျူးဗန်းမှာ သင်တန်းယူ လေ့ ကျင့်ခဲ့တဲ့၊ ကျူးဗန်း ပျောက်ကျားတွေက ထောက်ခံကူညီကြတယ်။ ဒိုမေနီကန် တော်လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးက ၁၉၅၉ ဂျွန် လ ၁၄ မှာ စခဲ့တယ်။ ၁၉၅၈-၅၉ မှာ ဒိုမိနိကန် တနိုင်ငံလုံး မှာ ထျူဇီဂျို ဆန့်ကျင့်ရေးစိတ်ဓါတ်တွေက ပြန့်နေ ပြီ။ အာဏာရှင်ကြီး ကိုယ်တိုင်လည်း နိုင်ငံရေးအရ စီးပွားရေးအရ တိုင်းပြည်ကို ဆက်ထိန်းထားနိုင်စွမ်းမရှိတော့။ သူတို့ နိုင်ငံမှာ လူထုအကြား သြဇာကြီးလှတဲ့ ကက်သလစ် ဘုရားရှစ်ခိုးကျောင်းတွေကပါ ထျူဇီဂျိုဆန့်ကျင်ရေးတွေ ဗြောင် တရားဟောလာနေကြတယ်။ မိနာဗာတို့ ညီ အမတွေလို လူငယ်ပညာတတ်တွေ၊ ပြည်ပအဖွဲ့အစည်းတွေ ထောက်ခံအား ပေးတဲ့ မြေအောက်တော်လှန်ရေး လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေကို သူ မထိန်းနိုင်တော့ဘူး။
တချိန်ထဲမှာပဲ နိုင်ငံခြား အစိုးရတွေက သူ့ အုပ်ချုပ်ရေးကို ဗြောင်ဝေဖန်နေကြပြီ။ ၁၉၅၉ ဂျွန်လက မအောင်မြင်လိုက်တဲ့ ဒိုမီနိကန် လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲနောက်ပိုင်း၊ ထျူဂျိုဟာ အိပ်မက်ဆိုးတွေရ၊ တော်တော်တုန်လှုပ်ကျန်ခဲ့တယ်။ သူ့ကို ဖြုတ်ချမယ့် လူငယ်နိုးကြားသူတွေကို တယောက်မကျန် လိုက်ဖမ်း၊ ထောင်ထဲထည့်၊ နှိပ်စက်မှုတွေ ဒင်းကြမ်းလုပ်လာ တော့ သူဘယ်လောက်ကြောက်နေသလဲဆိုတာ ပေါ်လွင်နေပြီ။ လူ ၁၀၀ကျော် အဖမ်းခံရတဲ့သူတွေကြားမှာ မြို့နေ ပညာတတ်လူ့မလိုင် အသိုင်းအ၀ိုင်းက တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေ၊ ပညာရှင်တွေပါ ပါလာတဲ့အခါ၊ ထျူဇီဂျိုကိုအာ ဏာက ဖြုတ်ချချင်တဲ့သူတွေက သူ့အတွင်းစည်းမှာရော၊ ပြည်တွင်း ပြည်ပမှာပါ တိုးတိုးလာနေပြီ။ ကျူးဗားနဲ့ ဗင်နီ ဇွဲ လားက ဒိုမေနီကန်က သူပုန်ထမယ့် ကျောင်းသားပညာတတ်တွေ၊ မြေအောက် ဆို ရှယ်လစ်ပါတီကို ကူတယ်။ တခြား တောင် အမေရိက မှာ ရှိတဲ့ နိုင်ငံရေး အဖွဲ့ အားလုံး က လည်း ထျူဇီဂျိုကို စတင်ဖိအားပေးလာကြပြီ။ အမေရိကနဲ့လည်း မတည့်တော့ဘူး။ နောက်ဆုံးတော့ ၁၉၆၁ ခုနှစ်မှာ လူပေါင်းထောင်သောင်းချီပြီး ရက်ရက်စက်စက်သတ်ဖြတ်ပြီး အာ ဏာထူထောင်ခဲ့တဲ့ ထျူဇီဂျို၏ နိဂုံး ရောက်လာပါတော့တယ်။
မီရာဘဲလ်တို့ညီအမတွေကို လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ပြီး ၆ လ နဲ့ ၅ ရက်အကြာ မေလ ၃၀ ရက် ၁၉၆၁ မှာ အာဏာရှင် ထျူဇီ ဂျိုကိုယ်တိုင်လည်း လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခံရပါတယ်။ ထျူဇီဂျိုကို တောက်လျှောက်ထောက်ခံလာခဲ့တဲ့ အမေရီက က စီအိုင် အေ ကိုယ်တိုင်ပါဝင်စွက်ဖက် ကူညီပေးခဲ့တဲ့လုပ်ကြံမှုဖြစ်ပါတယ်။ မာရီဘဲလ် ညီအမတွေ အာဇာနည်များကဲ့သို့ ကျဆုံး မှုဟာ သူတို့တိုင်းပြည်မှာ ဘယ်သူမှ အလိုမရှိတော့တဲ့ အာဏာ ရှင်သူယုတ်မာတဦး ကျဆုံးခန်းကို အပြီးသတ်ဆုံးဖြတ် ပေးတဲ့ သမိုင်းအချိုးအကွေ့ဖြစ်ပါတယ်။ လိပ်ပြာလေး ၃ ကောင်၏ သမိုင်းကတော့ ရှင်သန်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။
ကမ္ဘာကြီးပေါ်က ဘယ်လိုအာဏာရှင်မျိုးမဆို အဆုံးတနေ့မှာ သူနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ နိဂုံးဆိုတာ ရှိနေတယ်။
ကမ္ဘာမြေပေါ်မှာ လူ့အခွင့်အရေး၊ တရားမျှတမှု၊ လွတ်လပ်မှု ၊ အကြမ်းဖက်မှုများပပျောက်ရေး၊ ဒါတွေကို ဆက်လက် တိုက်ပွဲဝင်နေသေးတဲ့ နိုးကြားနေသေးတဲ့သူများ သိန်းသန်းချီ အများကြီးကျန်သေးတယ်။ ဒီလိုလူမျိုးတွေက လိပ်ပြာ လေးတွေကို ချစ်ကြတယ်။ ဒိုမေနီကန်က ကျောင်းတွေမှာမက အခြားလက်တင် အမေရိကနိုင်ငံအချို.ကကျောင်းတွေ မှာ ဒီနေ့ ကလေးငယ်တွေက လိပ်ပြာရင်ထိုးများ ကျောင်းဝတ်စုံတွေမှာ တပ်ဆင်လို့ မီရာဘဲလ်တို့ညီအမတွေကို ဂုဏ်ပြု လွမ်းဆွတ်နေကြပြီ။ တကယ်တန်းပြောရရင် မတရားတဲ့၊ ကြမ်းကြုတ်တဲ့ အာဏာရှင်စနစ်မှန်သမျှကို ရဲဝင့်စွာ ဆန့်ကျင် သူအားလုံးဟာ ဘယ်နိုင်ငံကပဲ ဖြစ်ဖြစ် တဦးနဲ့တဦး ဆက်သွယ်နေကြတယ်။ ဒီကမ္ဘာမြေပေါ်မှာ မတရားဖိနှိပ်တဲ့ အာ ဏာရှင်တွေကို တော်လှန်သူအားလုံးဟာ တနည်းမဟုတ်တနည်းနဲ့ မောင်နှစ်မ ညီအမ တော်စပ်သူတွေ မဟုတ်ပါလား။
ကမ္ဘာကြီးပေါ်ကလူသားအားလုံး ကြမ်းကြုတ်ရက်စက်ခြင်းဒဏ်အားလုံးမှ ကင်းဝေးကြပါစေ၊
ထားဝယ် ရေနက်ဆိပ်ကမ်းနှင့် မြန်မာလူငယ်တို့အတွက် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း…
အခုအခါမှာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေးကို မောင်းနှင်လာမယ့် ထားဝယ် ရေနက်ဆိပ်ကမ်းကို တည်ဆောက်နေပီ ဖြစ်ပါတယ်…. မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပထ၀ီဝင် အနေအထားအရလည်း လွန်စွာမှပင် အရေးပါတဲ့ နေရာမှာ ရှိနေတဲ့အတွက်လည်း ဒီစီမံကိန်းဟာ မြန်မာနိုင်ငံ စီးပွားရေး တိုးတက်ဖို့အတွက် အဓိက ကျတဲ့နေရာမှာ ရှိနေပါတယ်…. အဲ့ဒိအတွက် တည်ဆောက်ဆဲ ကာလနဲ့ တည်ဆောက်ပီး လုပ်ငန်းလည်ပါတ်တဲ့ ကာလတွေမှာပါ လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ်တွေ လိုအပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်…. ဒါကို အခုကတည်းက ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားနိုင်ရင် လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာ အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်သွားပြီး နိုင်ငံစီးပွားရေးကို တရှိန်ထိုး ပင့်တင်နိုင် မှာဖြစ်ပါတယ်….
အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းတွေအကြောင်း မပြောခင်မှာ ရေနက်ဆိပ်ကမ်း ဘာကြောင့် လုပ်ဖြစ်သလဲဆိုတာ ပြောပါ့မယ်…. အခုလက်ရှိမှာ ကမ္ဘာ့အရှေ့ခြမ်းမှ အနောက်ခြမ်းသို့ ရေကြောင်းသွားလာမှုဟာ ပင်လယ်ဓါးပြ ပေါများတဲ့ မလက္ကာ ရေလက်ကြားကနေ ဖြတ်သန်းသွားလာရပါတယ်… ထို့အတူ အရှေ့နဲ့အနောက်ကို ရောက်ဖို့ အရှေ့တောင်အာရှ ကျွန်းဆွယ်ကြီးကို ဖြတ်သန်းသွားလာတဲ့အတွက် အချိန်ပိုလင့်ပါတယ်.…. ရေကြောင်းခရီးမှာ အခန့်မသင့်လို့ မုန်တိုင်းမိရင် ပျက်ဆီးတာတွေလည်း ရှိပါတယ်…. ဒါတွေကို ဖြေလျှော့နိုင်ဖို့ ထားဝယ်ရေနက်ဆိပ်ကမ်းကို မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံတို့ ပူးပေါင်းတည်ဆောက် လိုက်ပါတယ်….
အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းတွေအကြောင်း မပြောခင်မှာ ရေနက်ဆိပ်ကမ်း ဘာကြောင့် လုပ်ဖြစ်သလဲဆိုတာ ပြောပါ့မယ်…. အခုလက်ရှိမှာ ကမ္ဘာ့အရှေ့ခြမ်းမှ အနောက်ခြမ်းသို့ ရေကြောင်းသွားလာမှုဟာ ပင်လယ်ဓါးပြ ပေါများတဲ့ မလက္ကာ ရေလက်ကြားကနေ ဖြတ်သန်းသွားလာရပါတယ်… ထို့အတူ အရှေ့နဲ့အနောက်ကို ရောက်ဖို့ အရှေ့တောင်အာရှ ကျွန်းဆွယ်ကြီးကို ဖြတ်သန်းသွားလာတဲ့အတွက် အချိန်ပိုလင့်ပါတယ်.…. ရေကြောင်းခရီးမှာ အခန့်မသင့်လို့ မုန်တိုင်းမိရင် ပျက်ဆီးတာတွေလည်း ရှိပါတယ်…. ဒါတွေကို ဖြေလျှော့နိုင်ဖို့ ထားဝယ်ရေနက်ဆိပ်ကမ်းကို မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံတို့ ပူးပေါင်းတည် ဆောက်လိုက်ပါတယ်…. အရှေ့မှ အနောက်သို့ပို့မယ့် ကွန်တိန်နာများဟာ ထားဝယ်ဆိပ်ကမ်းမှာ တစ်ထောက်နားလို့ အရှေ့ဘက်စီသို့ ကုန်လမ်းမှတစ်ဆင့် လျင်မြန်စွာပို့ဆောင်နိုင်တဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေ ဖြစ်လာမှာပါ…. အဲ့ဒိလိုပဲ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ထားဝယ်ဟာ အရှေ့ဘက်ခြမ်းဒေသအတွက် အဓိက ထွက်ပေါက်ဖြစ်သွားပြီး ဆက်စပ်နေတဲ့ လာအို၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ ဗီယက်နမ် နိုင်ငံတို့ကိုပါ များစွာ အကျိုးပြုသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်…… ထားဝယ်ရေနက် ဆိပ်ကမ်းကြောင့် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းတွေ များစွာ ပေါများလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်….. အခုလက်ရှိ လုပ်ငန်းခွင်များ လည်ပါနေချိန်မှာ နေ့စား လုပ်သားမှသည်၊ သံချီသံကွေး အလယ်၊ ဆောက်လုပ်ရေး အင်ဂျင်နီယာအဆုံး အလုပ်အကိုင်များစွာ ပေါ်ထွန်းလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်…. ထို့အတူ ဆိပ်ကမ်းပီးသွားချိန်မှာ ဆိပ်ကမ်းပါတ်ဝန်းကျင် ဖွံ့ဖြိုးလာမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ဟော်တယ်၊ မိုတယ်၊ အင်း နဲ့ စားသောက်ဆိုင် လုပ်ငန်းတွေလည်း တွဲဖက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်…. ထို့အတွက် ဟော်တယ်လုပ်ငန်း ကျွမ်းကျင် ၀န်ထမ်းများစွာ လိုအပ်ချက်တွေ ရှိလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်…. ဟော်တယ်လုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးလာတာနဲ့အမျှ ၎င်းနဲ့တွက်ဖက်လျက်ရှိတဲ့ ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်းလည်း အထိုက်အလျောက် မြင့်တက်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ် သို့ဖြစ်သည့် အတွက် ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်းနှင့် ပါတ်သက်တဲ့ တရားဝင်ဥပဒေများ အချိန်မှီ ထွက်ရှိလာမယ်လို့ မျှော်လင့်ရပါတယ်…. သို့မဟုတ်ရင်တော့ အခုလိုပဲ တရားမ၀င် လုပ်ကိုင်နေရမယ်ဆိုရင် နိုင်ငံတော်အတွက် လိုအပ်တဲ့ ၀င်ငွေတွေ မရတဲ့အပြင်၊ လိင်အလုပ်သမတွေလည်း တန်ရာတန်ကြေးမရပဲ ခေါင်းပုံဖြတ်ခံရပီး HIV အဓိက ဖြန့်ဖြူးရာ ဒေသတစ်ခု ဖြစ်သွားမှာကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့ လိုပါတယ်…. လူများစွာ ကူးလူးဆက်ဆံတာနဲ့အမျှ အဆိုပါ လူပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့ ပိုင်ဆိုင်ရာတွေကို မိမိနိုင်ငံမှာ ကျန်နိုင်သလောက် ချန်ထားနိုင်အောင် လောင်းကစားလုပ်ငန်းများလည်း အထိုက်အလျောက် ခွင့်ပြု လုပ်ဆောင်စေရမှာ ဖြစ်ပါတယ်…. သို့မှသာ မက်လောက်စရာ ငွေကြေး ပမာဏ မြောက်များစွာ နိုင်ငံတော် ၀င်ငွေအနေနဲ့ ရေရှည် ရရှိနေမှာ ဖြစ်ပါတယ်…..
လူမှု ပါတ်ဝန်းကျင် ဖွံ့ဖြိုးလာတာနဲ့အညီ ကျန်းမာရေး စောင့်လျှောက်မှုပါ တွဲဖက်လိုအပ်လာမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ကျန်းမာရေး စောင့်လျှောက်မှု ၀န်ထမ်းများလည်း လိုအပ်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်…. Ports နှင့် သက်ဆိုင်သော ၀န်ချီစက်များ လည်ပါတ်မှုတွေ ပါလာတဲ့အတွက်၊ ၀န်ချီစက်မောင်းများ၊ ၀န်ချီစက်ပြင် ၀န်ထမ်းများ၊ ၀န်ထမ်းအကူများ အစရှိသဖြင့် များစွာ လိုအပ်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်… ထို့အတူ လူအများအပြား နေထိုင်လာမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် လျှပ်စစ် သွယ်တန်းမှုဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင် ၀န်ထမ်းများ၊ Plumber များ၊ လက်သမားများ အစရှိသဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ ၀န်ထမ်းများစွာလည်း လိုအပ်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်…. ခောတ်မှီဆက်သွယ်ရေး ပစ္စည်းကိရိယာများကို အသုံးပြုလာမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် လျှပ်စစ် စက်ပြင် ၀န်ထမ်းများလည်း ပိုမိုလိုအပ်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်…. နည်းပညာအနေဖြင့်လည်း ကွန်ပျူတာများအား ထိရောက်စွာ အသုံးပြုလာမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် Computer Hardware, Systems, Network, Security အစရှိသဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ နယ်ပါယ်အလိုက် ကျွမ်းကျင် Engineer များစွာ လိုအပ်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်…. ကုမ္ပဏီအများစုမှာ မိမိတို့ ကိုယ်ပိုင်လည်ပါတ်မှု စနစ်နဲ့ သွားတဲ့အတွက် ၎င်းတို့နဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ Software များအား ရေးဆွဲ အသုံးပြုလာခြင်းဖြင့် Software Developing လုပ်ငန်းများလည်း ပိုမိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်….
မည်သည့် ကျွမ်းကျင်လုပ်သား ဖြစ်ပါစေ အဓိက အရေးကြီးသည်မှာ ဘာသာစကား ဖြစ်တဲ့အတွက် အခုကတည်းက နိုင်ငံခြား ဘာသာစကားကို ထမင်းစားရေသောက် ပြောနိုင်အောင် လေ့ကျင့်ထားနိုင်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်…. မည်မျှပင် လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်ပါစေ ဘာသာစကား အားနည်းလျင် ဆက်ဆံရေးမှာ အခက်အခဲဖြစ်နေမှာ ဖြစ်ပါတယ်…. အနည်းဆုံး ဘာသာစကား နှစ်မျိုးခန့် တတ်ကျွမ်းထားလျင် ပိုမိုကောင်းမွန်ပါတယ်….
သို့ဖြစ်သည့်အတွက် မကြာခင် ပွင့်လင်းလာမည့် ထားဝယ်ရေနက် ဆိပ်ကမ်းသစ်ကြီးကြောင့် ဆက်စပ်ပြီး လိုအပ်လာမယ့် လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ်များကို အခုကတည်းက ကြိုတင်ပြင်ဆင် ပျိုးထောင်ထားမှသာ လိုအပ်လာချိန်မှာ အရှိမြင့်မြင့်နဲ့ မြန်မြန်ဆန်ဆန် လည်ပါတ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်…. အဲ့ဒိအတွက် မြန်မာလူငယ်၊ လူရွယ်များအနေနဲ့ မိမိတို့ ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်တဲ့ သက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုမှာ တစ်ဖက်ကမ်းခတ် တတ်ထားအောင် အခုကတည်းက ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြပါလို့ တစ်နိုင်တစ်ပိုင် တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်….
မှတ်ချက် ။ ။ စနစ်တကျ တွက်ချက်ထားသော စာတန်းတစ်စောင် မဟုတ်ပါ…. သို့သော် ပါတ်ဝန်းကျင်နိုင်ငံများ လည်ပါတ်မှု အခြေအနေများပေါ် မူတည်၍ ဖြစ်ပေါ်လာမည့် လိုအပ်ချက်များကို ကြိုတင်မှန်းဆ၍ ရေးသားထားခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်….. အထူးသဖြင့် အလုပ်လက်မဲ့ ဖြစ်နေသော လူငယ်လူရွယ်များအတွက် အနာဂါတ်ရှိနေတာ သိစေဖို့ပါ…. အလုပ်တွေ ပေါများလာချိန်မှာ အရည်အချင်းမှီမှီ ဖြစ်နေစေဖို့အတွက် အထူးရည်ရွယ်ပါတယ်…..
Posted in: ပြည်တွင်းသတင်း
နိုင်ငံတကာပဋိပက္ခဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့ICG ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးဆုကို မြန်မာသမ္မတဦးသိန်းစိန်ရရှိ ၂၀၁၃ ဧပြီတွင်ဆုလက်ခံရမည်
Crisis Group ၏ ဆုချီးမြှင့်ပွဲနှင့် ညစာစားပွဲသည် သိန်းပေါင်းများစွာသော လူများ၏ ဘဝများကို အသွင်ပြောင်းစေသော အမြင်ကျယ်သည့် ခေါင်းဆောင်မှုနှင့် ပဋ္ဋိပက္ခများ ပြီးဆုံးသွားရေး ကမ္ဘာကြီး၏
ကတိကဝတ်များကို လုပ်ဆောင်ပေးသော အစိုးရ၊ ဆက်ဆံရေး လုပ်ဆောင်မှု (diplomacy)နှင့်
ပြည်သူ့ရေးရာမူဝါဒတို့မှ အဓိက ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက် ဂုဏ်ပြုသည့် အခွင့်အလမ်း တစ်ခုပင် ဖြစ်ပါသည်။
“အခုလိုကမ္ဘာကြီးရဲ့ နေရာအတော်များများဟာ မှားယွင်းတဲ့ လမ်းကြောင်းကို ဦးတည်နေပုံရတဲ့
အချိန်မျိုးမှာ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ဘရာဇီးနိုင်ငံဟာ သူတို့ ပြည်သူတွေ ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ လမ်းကြောင်းပေါ်မှာ သမ္မတတွေရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုနဲ့ တွေ့ရတာဟာ ထင်ရှားတဲ့ ဥပမာတွေပါပဲ” ဟု International Crisis Group နာယက Thomas R. Pickering က ပြောကြား ခဲ့ပါသည်။
“သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ရော သမ္မတ Lula ရောဒီဆုနဲ့ ထိုက်တန်ပါတယ်။ ဒီလို ဂုဏ်ပြုရတဲ့အတွက် မြန်မာနဲ့ ဘရာဇီးတို့အတွက် ရှေ့ဆက်မယ့် အရေးကြီးတဲ့ ခြေလှမ်းများမှာ အထောက်အကူ ဖြစ်ပါမယ်။ အပယ်ခံ နှစ်များကနေ ဒေသတွင်းနဲ့ နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံရေး မြှင့်တင်ရာမှာ သူတို့ရဲ့ နေရာပိုမို မြှင့်တင်နိုင်အောင် အားပေးသလို ဖြစ်ပါတယ်” ဟု ၎င်းက ပြောပါသည်။ Crisis Group ဥက္ကဌ Louise Arbourက ပြောကြားရာတွင် “မြန်မာနိုင်ငံမှာ ၂၀၁၁ မတ်လ သမ္မတဦးသိန်းစိန် အစိုးရ တက်လာကတည်းက ယခင်က လုပ်ဆောင်ခဲ့ဖူးခြင်း မရှိတဲ့ မှတ်မှတ်ထင်ထင် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေ စတင် လုပ်ဆောင် လာပါတယ်။ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား ရာပေါင်းများစွာ လွှတ်ပေးခြင်း၊ သတင်းစာ လွတ်လပ်ခွင့် ဖြေလျော့ပေးခြင်း၊ အဓိက အတိုက်အခံပါတီနဲ့ ဆွေးနွေးမှု ပိုမိုလုပ်ဆောင်လာခြင်းများ ပါဝင်ပါတယ်” ဟုဆိုပါသည်။
သို့သော် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ယနေ့ထိ လုပ်ဆောင်လာသော နိုင်ငံရေးအရ ဖြေလျော့မှုများအပြင် ဆက်လက် လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ် နေပါသေးသည်။ မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် ရခိုင်နှင့် ရိုဟင်ဂျာ အုပ်စုများကြားတွင် ဖြစ်ပွားလျက်ရှိသည့် ပြင်းထန်သော ဖြစ်ရပ်များကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်မည့်နည်းလမ်း များ ချက်ချင်း ရှာရမည် ဖြစ်ပါသည်။ (Crisis Group သည် ဇွန်လက အစီရင်ခံစာနှင့် ယခုလ အစောပိုင်းက ထုတ်ပြန်သော အစီရင်ခံစာများတွင် ဖေါ်ပြပြီးဖြစ်ပါသည်) အဆိုပါ ဖြစ်ရပ်များကြောင့် ပြည်သူများ၏ ဘဝများ ပျက်စီးခြင်းများ ဖြစ်နေဆဲ ဖြစ်ရာ တိတိပပ ဆိုရလျှင် မူဆလင် ရိုဟင်ဂျာ လူနည်းစုတွင် ပိုမို ပျက်စီး နေရပါသည်။ တိုင်းပြည်တွင် အရေးကြီးသော တိုးတက်မှုများလည်း မြင်တွေ့ရလျက်ရှိရာ နှစ်ပေါင်းငါးဆယ်အတွင်း ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အုပ်စု အတော်များများနှင့် အစိုးရသည် ပဏာမ အပစ်အခတ်ရပ် စဲရေးများ လက်မှတ်ရေးထိုး နိုင်ခဲ့ပြီး၊ ကချင် လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ (Kachin Independence Organisation) နှင့်မကြာမီ သဘောတူညီချက် တစ်ခု ရလိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်ရပါသည်။
ဘရာဇီးနိုင်ငံတွင် ၂၀၀၃ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၀ ထိ သမ္မတအဖြစ် တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့သူ Lula ဟု
လူသိများသော Luiz Inácio Lula da Silva သည် သူ၏ နိုင်ငံအား စီးပွားရေးနှင့် နိုင်ငံရေး ခေတ်သစ်ကို ပုံဖော်ပေးခဲ့ပြီး၊ သန်းပေါင်းများစွာသော လူများကို ဆင်းရဲတွင်းမှ လွတ်စေခဲ့ပါသည်။ ၎င်း၏ အစိုးရသည် အဆိုပါ ခိုင်မာသော အခြေခံပေါ် မူတည်၍ လူမှုရေး အစီအစဉ်များဖြင့် ဒေသတွင်းနှင့် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အရေးပါသော ပလေယာ (Player) တစ်ဦး ဖြစ်လာပါသည်။ နိုင်ငံတကာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနှင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင် တောင်ဖက်နိုင်ငံချင်း ချဉ်းကပ်မှု (South–South approach) ကိုဖော်ဆောင် လာပါသည်။
သမ္မတ da Silva သည် စုစည်းမှုတွင် အမှန်တကယ် ခိုင်မာလာစေရေး အတွက် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် လုပ်ဆောင်ရေး (partnership) ကို ဒေသတွင်း အိမ်နီးချင်းများအား အဆိုပြုလာပါသည်။ ဘရာဇီးတို့၏ ဆက်ဆံရေးပုံစံသည် ၎င်း၏ တောင်အမေရိက အိမ်နီးချင်းများ အနေဖြင့် ၎င်းတို့၏ ပြည်တွင်း ပဋိပက္ခများ ရင်ဆိုင်ရာတွင် အထောက်အကူ ပြုပါသည်။ သမ္မတda Silva ၏ အစိုးရလက်ထက်တွင် သံတမန်မစ်ရှင် (၁၇)ခု အသစ်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ရာ ဘရာဇီး၏ အာဖရိကအပေါ်ထောက်ခံ ပံ့ပိုးမှုမှာလည်း မှတ်မှတ်သားသား ရှိခဲ့ပါသည်။ ဘရာဇီးသည် ဟေတီနိုင်ငံ၏ ငြိမ်းချမ်းရေး ထိန်းသိမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ဦးဆောင်ပါဝင်ခဲ့ပြီး၊ လက်ဘနွန်နိုင်ငံ၏ ကုလသမဂ္ဂ မစ်ရှင် တွင်လည်း ရေတပ် ပါဝင်ခဲ့ပါသည်။
Lula၏ အစိုးရသည် ကမ္ဘာကြီးနှင့် ၎င်း၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး စီမံကိန်းများ၏ လိုအပ်ချက်နှင့် လိုက်လျောညီထွေစွာ ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ခွင့်ရှိသော ဆက်ဆံရေးမျိုးကို ဖွံ့ဖြိုး စေခဲ့ပါသည်။ အမျိုးမျိုးသော မဟာမိတ်များကလည်း နိုင်ငံကို ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း တည်ရှိစေရန်နှင့် သြဇာလွှမ်းမိုးမှု နက်ရိူင်းစေရန် လုပ်ဆောင်မှုကို ပိုမို အထောက်အကူ ဖြစ်ပါသည်။ ဘရာဇီးလ်၏ အုပ်စုဖွဲ့မှု၊ မဟာဗျူဟာကျသော လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် ပြုခြင်းနှင့် မဟာမိတ် အသစ်ဖွဲ့ခြင်းများသည် တိုင်းပြည်နှင့် ၎င်း၏ ပါတနာများ (partners) အား နိုင်ငံတကာနယ်ပယ်၏ ပါဝါ လေဟာနယ်၌ နေရာရစေပါသည်။ ယခုအခါ ရှစ်နှစ် တိုင်လာခဲ့ပြီ ဖြစ်သော Crisis Group ၏ In Pursuit of Pease ဆုချီးမြှင့်ပွဲနှင့် ညစာစားပွဲသည် ကမ္ဘာတစ်လွှား ဆိုးရွားသော ပဋိပက္ခများကို ကာကွယ်ခြင်းနှင့် ဖြေရှင်းချင်းများတွင် တစ်ဦးချင်းထူးချွန် အောင်မြင်စွာ လုပ်ကိုင်နိုင်မှုများအား အသိအမှတ်ပြုသော အခမ်းအနား ဖြစ်ပါသည်။ ပြီးခဲ့သည့် အကြိမ်များက ဆုချီးမြှင့် ခံရသူများတွင် အမေရိကန် သမ္မတများ ဖြစ်ကြသော William Jefferson Cliton နှင့် George H.W. Bush ၊ နိုဘယ် ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင် Martti Ahtisaari နှင့် Ellen Johnson Sirleaf နှင့်ငွေများ လှူဒါန်းသူ သဌေးကြီး George Soros တို့ ပါဝင်ပါသည်။
၀ံလက်ဖောင်ဒေးရှင်းမှ ရခိုင်ဒုက္ခသည်တွေအတွက် အရေးပေါ်ကူညီကယ်ဆည်ရေး ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိ
ရခိုင်ပြည်တွင် လက်ရှိဖြစ်နေသော အရေးအခင်းတွင် ဒုက္ခရောက်နိန်ဂတ်တေ ရခိုင်ပြည်သူတိအတွက် အရေးပေါ် ကူညီကယ်ဆည်ရေး ဆောင်ရွက်ဖို့ ၀ံလက်ဖောင်ဒေးရှင်းမှ စစ်တွေမြို့အတွင်း အလှူငွေတွေ ကောက်ခံနေရကြောင်း လေးဝတီက သိရှိရပါသည်။ ရရှိလာရေ အလှူငွေတွေ၊ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတွေ၊ စားသောက်ကုန်တွေကို လတ်တလော လိုအပ်နေရေ နေရာတွေမှာ အရေးပေါ် ကူးညီပေးသွားဖို့လို့ သိရပါသည်။
လက်ရှိအသေ အပျောက်စာရင်းတွေနှုင့် ဒုက္ခသည်တွေကို ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအတွက် အရေးပေါ် လိုအပ်ချက်နဲ့ ပတ်သက်လို့ ၀ံလက်ဖောင်ဒေးရှင်းက တာဝန်ရှိသူတစ်ယောက် ဖြစ်တဲ့ ဦးသိန်းထွန်းအေး ကအခုလို ပြောပြလားပါသည်။
“အခုဖြစ်လားရေ အရေးအခင်းမှာ လူ ၁၀ ကျော်လောက် သေပြီးတော့ ဒဏ်ရာရတာက စစ်တွေဆေးရုံကြီးမှာ သတ်သတ် အယောက် ၂၀ ကျော်ပါ အသေအပျောက်စာရင်း အတိအကျကိုတော့ခါ မပြောနိုင်သိမ့်ပါ။ လက်လှမ်းမမီတဲ့ နေရာတွေက ဒုက္ခသည်လူဦးရေ စာရင်းတွေကို အတိအကျကောက် ဖို့မလွယ်ပါ။ မီးလောင်ရာမှာ ပါသွားတဲ့သူက ကျောက်ဖြူမှာ များပါရေ။ အခုက ကားလမ်း၊ ရေလမ်းတွေကို ပိတ်ထားကာ သွားရလာရမလွယ်ပါ။ မင်းပြား၊မြောက်ဦးဖက်က ထွက်ပြေးလာကြတဲ့ ဒုက္ခသည်တွေလဲ့ အများကြီးပါ” လို့ ပြောပါသည်။ စစ်တွေမြို့ ပြည်သူဆေးရုံးမှာလည်း ဘင်္ဂလီ အကြမ်းဖက်မှုကို ခုခံကာကွယ်ရင်း ဒဏ်ရာ အပြင်အထန်းရရှိပြီး ဆေးကုသခံ ယူနေရတဲ့ ရခိုင်တိုင်းရင်းသား လူနာ (၁၁) ယောက်မှာ ဦးစိန်သာအောင်၊ မောင်မောင်နိုင်၊ မောင်ထွီးစိန်၊ ဦးအောင်ရွှေမြ၊ ညီဝင်း၊ မောင်စောဖြူ၊ ဦးသန်းထွန်း၊ မောင်စိုးညွှန်၊ အောင်မင်းခိုင်၊ ဦးမောင်သန်းရွှေ၊ အောင်လင်းရို့အပြင် အယောက် ၂၀ ကျော်လောက်ရှိကြောင်းကို ၀ံလက်ဖောင်ဒေးရှင်း စာရင်းအရ သိရပါသည်။ “အခုလက်ရှိ ဒုက္ခသည်တွေကို နေရာချထားရေအပိုင်းတွေကို မလုပ်ပေးနိူင်ပါသိမ့်။ အယင်ဇွန်လမှာ ဖြစ်ခရေ ဒုက္ခသည်တွေကိုတော့ စားဖို့သောက်ဖို့ ဆီးဝါးကုသရေး အပိုင်းတွေကို လုပ်ပေးနိူင်ခဲ့ပါရေ။ အရေးပေါ် လိုအပ်တွေလောက်ကို ကူညီပေးနိူင်ခဲ့ပါရေ။ အခုလည်းပဲ ဒဏ်ရာရလို့ ဆီးရုံကို ရောက်လာရေလူတွေ၊ မိသားစုတွေ သေဆုံးလားခရေလူတွေကို အထောက်အပံ့ပေးလားဖို့ ကျနော်ရို့ ၀ံလက်ဖောင်ဒေးရှင်း အနေဖြစ် အရေးပေါ် အကူအညီ ပေးသွားဖို့ အစီအစဉ်လုပ်ပြီးတော့ လုပ်ဆောင်ပါတယ်။ ယင်းလူတွေအတွက် အိုးအိမ်တွေ ပြန်လည် နေရာချထားဖို့ အတွက်တော့ ကျနော်ရို့မှာလည်း အင်အားမရှိပါ။ ယေဒါလေ့သော့ သူတို့တွေ နေဖို့ထိုင်ဖို့ အဆင်ပြေအောင် ကူညီကယ်ဆည်ရေးတွေကို လုပ်ဆောင်ပေးနေပါရေ” လို့ သူက ဆက်ပြောပြပါသည်။ လိုအပ်သည် အလှူငွေတွေ၊ ပစ္စည်းတွေ့ကိုပေးပို့ လှူဒါန်းချင်ပါက ဦးသိန်းထွန်းအေး – Ph- 0943154012 ၊
ကိုသိန်းဝင်း – 09450540401၊ ကိုထွန်းမြင့်သိန်း – 09450541792 ၊ ခိုင်ကောင်းစံ – 0949269284 ၊
အောင်ကျော်ဝင်း – 09421711588 ရို့ကို တိုက်ရိုက် ဆက်သွယ်နိုင်ပါကြောင်း ကြေငြာထားပါသည်။
လက်ရှိ အရေးအခင်းမှာ သေဆုံးသူတွေကို သင်ဂြိုလ်ဖို့နန့် ဒဏ်ရာရသူတွေကို ဆီးကုသဖို့၊
ထွက်ပြေးလာကြတဲ့ ဒုက္ခသည်များအား ကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်ဖို့၊ နောက်ထပ် မသေဆုံးဘဲ မီးတိုက်မခံရအောင် ဒေသခံကာကွယ်ရေး အဖွဲ့တွေ စေလွှတ်နိုင်ဖို့ လမ်းစရိတ်၊ စားစရိတ်တွေအပြင် တခြားလိုအပ်ချက် တွေအတွက် အလှူငွေတွေ တည်ငြိမ်နေသော ဒေသတွေ ကောက်ခံပြီးတော့ နောက်ထပ် အလှူငွေတွေကို ပါဝင်ကြဖို့ တိုက်တွန်း နှိုးဆော်ထားပါသည်။
ရခိုင်လူမှု ကွန်ယက်တောင်ကုတ် မှဦးဆောင်ပနာ မင်းပြား၊ မြေပုံ၊ ကျောက်ဖြူ၊ မြောက်ဦးမြို့တွေက ဆုံးရှံးနစ်နာလားရေ ရခိုင်သွီးချင်းမိသားစုတိအတွက် အထောက်အပံ့တွေ ရရှိစီဖို့ အလှုငွေ ကောက်ခံလားဖို့ အစီအစဉ်ကို တောင်ကုတ်မြို့မှာလည်း စတင်ဆောင်ရွက်နိန်ကြောင်း သိရပါသည်။
ပါဝင်လှုဒါန်းလို သူတို့နေဖြင့် ဖုံးနံပါတ် – ၀၉၄၂၁၇၂၄၃၈၀/ ၀၉၄၂၁၇၂၄၅၅၆/ ၀၉၈၅၃၀၁၁၈ ရို့ကို ဆက်သွယ်လှုဒါန်း နိုင်ပါကြောင်း နှိုးဆော်ထားပါသည်။ ဇွန်းလ ၈ ရက်နေ့ ကပင် စတင်ဖြစ်ပွားကြောင်း ပဋိပက္ခအတွင်း သေဆုံးသူ ၅၀ ယောက် ဒဏ်ရာရသူ ၅၄ ယောက်ရှိပြီးတော့ လူနေအိမ် ၂၂၃၀ အိမ် ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီး ကျောင်းတွေ အပါအ၀င် ဘာသာရေး အဆောက်အဦး ၁၄ ကျောင်း မီးတိုက်ခံရပြီးတော့ ဒေသခံ ပြည်သူ ၆၁၄၆၂ ယောက် အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ ဖြစ်နေရတယ်လို့ အစိုးရက ကြေငြာခပါသည်။
အခု လက်ရှိ ရခိုင်ပြည် မင်းပြား၊ မြောက်ဦး၊ မြေပုံ၊ ကျောက်ဖြူမြို့တွေမှာ တဖက်နဲ့တဖက် အပြန်အလှန် မီးတိုက်မူတိကြောင့် အောက်တိုဘာလ ၂၁ ရက်နိ့က စတင်ဖြစ်ပွားခပနာ အခုအချိန်ထိ သေဆုံးသူ ၁၂ ယောက် ဒဏ်ရာရသူ ၅၀ နဲ့ လူနေအိမ် ၁၉၄၈ ဆောင်၊ ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးကျောင်းအပါအ၀င် ဘာသာရေးအဆောက်အဦး ၈ ခု မီးလောင်ပျက်စီးပနာ လူအများအပြား အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဘ၀ကို ကျရောက်နေရကြောင်း အစိုးရ ထုတ်ပြန်ထားသော်လည်း ယင်းထက် များပြားကြောင်း ဒေသခံသတင်း တွေဆီမှာ သိရပါသည်။
မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနယ်စပ် လူဝင်လူထွက် ဂိတ်များ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပြီဖြစ်ကြောင်း
မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနယ်စပ် လူဝင်လူထွက်ဂိတ်များကို နိုဝင်ဘာလ ၂၄ ရက်နေ့က စတင်ပြီး ပြန်လည် ဖွင့်လှစ်နေပြီ ဖြစ်ကြောင်းနှင့် တစ်ရက်ထက် တစ်ရက် ကူးသန်းသွားလာ သူများပြားနေပြီ ဖြစ်ကြောင်းလည်း သတင်းရရှိသည်။
''နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် သွားလာခွင့်တွေကို နိုဝင်ဘာလ ၂၄ရက်နေ့မှာ စတင်ဖွင့်လှစ်ပါပြီ။ နေ့ချင်းပြန်ရော၊ ၇ ရက်ဗီဇာသမားတွေရော အားလုံးကို ပြန်လည် သွားလာခွင့် ပြုလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်''ဟု မောင်တော နယ်စပ် ကုန်သည်များအသင်း ဥက္ကဌက ပြောသည်။ နေ့ချင်းပြန် သွားလာခွင့်ကို နိုဝင်ဘာလ (၁၉ ) ရက်နေ့တွင် နယ်စပ်လုံခြုံရေးအရ ပိတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပြီး တစ်ပတ်အကြာတွင် ပြန်လည်ဖွင့်လှစ် လာခြင်းဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရသည်။ ယင်းအပြင် ဇွန်လ ၈ ရက်နေ့ မောင်တော ဆူပူအကြမ်းဖက်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့သည်မှစကာ ငါးလကျော်ကြာ သွား လာခွင့် ပိတ်ထားခဲ့သည့် (၇) ရက်ဗီဇာဖြင့် သွားလာခွင့်ကိုလည်း ပြန်လည်ဖွင့်လှစ် ပြီဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရသည်။
''၇ ရက်ဗီဇာနဲ့ သွားလာခွင့်ကို ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်တော့ နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေး ပိုမို အားကောင်းလာမယ့် သဘောမှာ ရှိပါတယ်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှက ကုန်သည်တွေလည်း ဒီကို လာခွင့်ရပြီ။ ဒီကကုန်သည်တွေလည်း ဟိုဘက်သွားပြီး ဈေးကွက်ရှာဖွေတာတွေ လုပ်နိုင်လာပြီဆိုတော့ ကောင်းပါတယ်'' ဟု ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ကုန်သည်တစ်ဦးက မောင်တောမြို့သို့ ရောက်ရှိစဉ် ပြောကြားခဲ့သည်။ ''၇ ရက်သွားလာခွင့်ကို ဖွင့်လှစ်တာဟာ မောင်တောနယ်စပ် ကုန်သွယ်ရေးကို တိုးတက်လာစေတယ် ဆို တာကတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ နှစ်ဖက် ကုန်သည်အချင်းချင်း ဆက်သွယ်ဖို့ ဆိုရင်တောင် နေ့ချင်းပြန်ကို ခွင့်ပြု လိုက်တာနဲ့ လုံလောက်တယ်။ လက်ရှိမှာလည်း ကုန်သွယ်မှုတွေ လုပ်နေတာပဲ။ ဖုန်းနဲ့ ဆက်သွယ်လို့လည်း ရပါတယ်'' ဟု မောင်တောမြို့မှ နယ်စပ်ကုန် သည်တစ်ဦးက ပြောသည်။ မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ၇ ရက် သွားလာခွင့်ကို နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေး တိုးတက်လာစေ ရေးအတွက် ခွင့်ပြု ထားခြင်းဖြစ်ကြောင်းနှင့် သွားလာသူများမှာ မောင်တောနယ်စပ် ကုန်သည်များအသင်း၏ အသင်းဝင်ဖြစ် ရမည်ဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရသည်။ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် (၇) ရက်သွားလာခွင့်ကို ပြန်လည်ခွင့်ပြု လိုက်သော်လည်း အမှန်တကယ် ကုန်သည် များကိုသာ သွားလာခွင့် ပြုသင့်ကြောင်းနှင့် အမှန်တကယ် ကုန်သည်ဟု သိစေရန် ကုမ္ပဏီ၏ ထောက်ခံ ချက်များကို စစ်ဆေးရန် လိုအပ်ကြောင်း မောင်တောမြို့ခံများက ပြောကြားကြသည်။ ''အခုလို ၇ ရက်သွားလာခွင့်ကို ခွင့်ပြုလိုက်တာဟာ နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးအတွက် ကောင်းကျိုးတွေ ရှိနိုင် သလို နယ်စပ်လုံခြုံရေးအတွက် သေသေချာချာ စစ်ဆေးမှုတွေ မလုပ်နိုင်ရင် စိုးရိမ်စရာတွေ ဖြစ်လာနိုင် တယ်။ ဖောက်ခွဲရေးသမားတွေ ကုန်သည်အယောင်ဆောင်ပြီး ဒီလမ်းက ၀င်လာနိုင်ပါတယ်။ မောင်တော မှာ၁၉၉၄ ခုနှစ်မှာ ဖောက်ခွဲရေး သမားတွေ လက်ချက်နဲ့ မြို့ပေါ် ၅ နေရာမှာ ပေါက်ကွဲမှုတွေ ဖြစ်ခဲ့ဖူးတယ်။ ဒါကြောင့် စိုးရိမ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး ကုန်သည်တွေသာ သွားလာခွင့်ရှိတယ်လို့ ဆိုပေမယ့် အမှန်တကယ်မှာ မောင်တောက ဘင်္ဂလီတွေဆေးကုသဖို့သွားသူနဲ့ မှောင်ခိုစီးပွားရေးလုပ်သူတွေပဲ သွားလာတာ များပါ တယ်'' ဟု မောင်တောမြို့ခံတစ်ဦးကပြောသည်။
မောင်တော နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေး တိုးတက်လာခြင်းမှာ ၇ ရက်ဗီဇာဖြင့် သွားလာခွင့်ပြု လိုက်ခြင်းနှင့်သက် ဆိုင်ခြင်းမဟုတ်ကြောင်းနှင့် ၇ ရက်သွားလာခွင့် မရှိရင်လည်း အဆင်ပြေကြောင်း ကုန်သည်များကပာ ကြားကြပါသည်။ မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနယ်စပ် ဖြတ်ကျော်သွားလာခွင့်ကို နေ့ချင်းပြန်ခရီးသည်များနှင့် ၇ ရက်နေထိုင် သွားလာသည့် ကုန်သည်များကို ခွင့်ပြုပေးထားပြီး ၇ ရက်ပြည့်ပြီးသော်လည်း နောက်ထပ် ရက်တိုးနေထိုင်ခွင့်ကိုလည်း ခွင့်ပြုချက်တောင်းခံ နေထိုင်နိုင်ကြောင်းလည်း သိရသည်။ လက်ရှိအချိန်တွင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှ နေ့ချင်းပြန်ခရီးသည် တစ်နေ့လျှင် ၅၀ ဦးခန့်နှင့် ၇ ရက်ဗီဇာဖြင့် ၀င်ရောက်သူ ၁၅ ဦးခန့်ရှိပြီး မြန်မာဘက်မှလည်း နေ့ချင်းပြန်ခရီးသည် ၅၀ ဦး ၊ ၇ ရက်ဗီဇာဖြင့် သွားသူ ၂၀ ဦးခန့် ရှိနေကြောင်းသိရှိရပါသည်။
ပုံမှန် အခြေအနေ ပြန်လည် ရရှိမှသာ ပြည်တွင်း လုံခြုံရေး အက်ဥပဒေအား ရုပ်သိမ်းမည်ဟု ထိုင်း ဝန်ကြီးချုပ် ပြော
လမ်းများပေါ်တွင် လုံခြုံရေး အခြေအနေ ပုံမှန် ရောက်ရှိမှုကို လုံခြုံရေး အေဂျင်စီများက အာမခံချက် ပေးချိန်တွင် ပြည်တွင်း လုံခြုံရေး အက်ဥပဒေအား ရုပ်သိမ်းရန် ထိုင်းအစိုးရမှ အသင့်ရှိကြောင်း ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ရင်လက် ရှင်နာဝပ်မှ ပြောကြားခဲ့ ပါသည်။ ရင်လက်အား အယုံအကြည် မရှိ အဆို
တင်သွင်း ထားသည့် လွှတ်တော် အစည်းအဝေး မတက်ရောက်မီ ပြောကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
အခြေအနေ အား အစိုးရ အဖွဲ့သို့ အစီရင်ခံစာ မတင်သွင်းမီ လုံခြုံရေး အေဂျင်စီ များသည် အစည်းအဝေး ကျင်းပလျက် ရှိကြောင်း ရင်လက်မှ ပြော ကြား ခဲ့ပါသည်။ နိုဝင်ဘာလ ၂၄ ရက် နေ့တွင် ရဲတပ်ဖွဲ့ များနှင့် ပဋိပက္ခ ဖြစ်ပွားစဉ် ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့သော ကန့်ကွက် ဆန္ဒပြသူများအား ဂရု စိုက်ရန် ပြည်သူ့ ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီး ဌာနမှ ၎င်းအဖွဲ့အား ညွှန်ကြား ထားပြီး ဖြစ်ကြောင်း သူမက ပြောကြားခဲ့ ပါသည်။ ပုံမှန် အခြေ အနေ ပြန်လည် ရရှိမှသာ အစိုးရ အဖွဲ့မှ ထုတ်ပြန် ထားသည့် ပြည်တွင်း လုံခြုံရေး အက်ဥပဒေအား ရုပ်သိမ်းမည် ဖြစ်သော်လည်း ရုပ်သိမ်းမည့် ရက်အား အတိအကျ မသိရှိ ရသေးကြောင်းနှင့် ဆန္ဒပြမှု များတွင် ဖမ်းဆီး ရမိသည့် သူများအား တရားဥပဒေ နှင့်အညီ စီရင် ဆောင်ရွက် သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းမှ ထပ်လောင်း ပြောကြားခဲ့ ပါသည်။
တောင်အာရှ နိုင်ငံများတွင် စစ်သွေးကြွ များအား ထိရောက်စွာ နှိမ်နင်းရန် အမေရိကန် နိုင်ငံမှ ဖိအားပေး
နိုဝင်ဘာလ ၂၅ ရက် နေ့တွင် ပါကစ္စတန်ရှိ ဘာသာရေး အခမ်းအနား တစ်ခု အနီး၌ ဗုံးပေါက် ကွဲမှုကြောင့် အနည်း ဆုံးလူ ၄ ဦး သေ ဆုံးပြီး ၇ဝ ဦး ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့ကြောင်း ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ပြောကြားခဲ့ ပါသည်။
လူ ၄ ဦးမှာ ပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်သည့် နေရာ၌ပင် ချက်ချင်း သေဆုံးကာ အများအပြား ဒဏ်ရာရရှိ ခဲ့ပြီး ထိခိုက် ဒဏ်ရာ ရသူများမှာ ပြင်းထန်သည့် အတွက် သေဆုံးသူ အရေအတွက် များပြားလာ မည် ဖြစ်ကြောင်း ခရိုင် ဆေးရုံရှိ ဆရာဝန် တစ်ဦး ဖြစ်သည့် Khalid Aziz Batoch မှ ပြောကြားခဲ့ ပါသည်။ ပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်သည့် ဗုံးအား လမ်းဘေး ဈေးဆိုင်တွင် ထောင်ထားခြင်း ဖြစ်ပြီး လုံခြုံရေး အရာရှိ ၅ ဦး ဒဏ်ရာရရှိ ခဲ့ကြောင်း အဆင့်မြင့် ရဲအရာရှိ တစ်ဦး ဖြစ်သည့် Malik Mushtaq မှ ပြောကြားခဲ့ ပါသည်။ တောင်အာရှ နိုင်ငံများတွင် စစ်သွေးကြွ များအား ထိရောက်စွာ နှိမ်နင်းရန် အမေရိကန် နိုင်ငံမှ
ဖိအားပေးလျက် ရှိကြောင်း သိရှိရ ပါသည်။
ငလျင်ဒဏ်ကြာင့် ပျက်စီးခဲ့သည့် မန်းစွယ်တော်ဘုရားစိန်ဖူးတော် အသစ်ပြန်လည် ပြုပြင်မည်
နိုဝင်ဘာ ၁၁နေ့ရက်နေ့တွင် လှုပ်ခက်ခဲ့သော ငလျင်ကြောင့် ပြိုကျပျက်စီးခဲ့သော စွယ်တော်ဘုရားစိန်ဖူး တော်အား ဒီဇင်ဘာလအတွင်း အသစ်ပြန်လည် ပြုလုပ်တပ်ဆင်သွား မည်ဖြစ်ကြောင်း မန်းတိုင်းသာသနာရေး ၀န်ကြီး ဦးသန်းစိုးမြင့်ကပြောသည်။
ငလျင်ကြောင့် ပျက်စီးသွားတဲ့ ဘုရားစိန်ဖူးတော်ကို အရင်ပုံစံနဲ့ ပုံစံတူ ပြန်လည်ပြုလုပ် သွားမှာပါ။ ဒီဇင် ဘာလအတွင်းလုပ်ဖို့ တာဝန်ရှိ သူတွေနဲ့ ညှိနှိုင်းထားပါတယ်။ ရတနာပစ္စည်းတွေကလည်း အားလုံးနီးပါးပြန်တွေ့ ပါတယ်။ အနည်းအကျင်း လောက်ပါပဲ။ ဆက်လက်ရှာဖွေမှုတွေ ပြုလုပ်သွားမှာပါ ဟု ၀န်ကြီးကပြောသည်။ နိုဝင်ဘာ ၁၁နေ့မနက်တွင်အင်းအား ၆.၈ရစ်ချတာစကေးရှိ ငလျင်လှုပ်ခက်ခဲမှုကြောင့် မန်းလေးတိုင်း ဒေသကြီး အမရပူရမြို့နယ်အတွင်းရှိ စွယ်တော်ဘုရား စိန်ဖူးတော် ပြိုကျပျက်စီးခဲ့သည်။ အဆိုပါပျက်စီးမှု ကြောင့် ရှာဖွေမှု နှစ်ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ပထမအကြိမ် ရှာဖွေမှုတွင် စိန်ကြီး ၁ပွင့်၊ ပတ္တမြားသုံးပွင့်၊ နီလာ ၄ပွင့်၊ မြ ၄ပွင့်၊ ဥသ(သကြီး)ဖာ ၄ပွင့်၊ ဂေါ်ပိတ် ၃ပွင့်၊ ပုလဲ ၃ပွင့်၊ သန္တာ(ယူဆ) ၃ပွင့်၊ အခြားစိန်သေးများ ၉၄ပွင့် ပြန်လည်တွေ့ရှိသည်။ ဒုတိယအကြိမ်ရှာဖွေမှုတွင် စိန်ပွင့်သေး ၄ပွင့်၊ နီလာ ၁ပွင့်၊ ငါးပွင့်ဆိုင်ပန်းပွင့်ပုံစံအနီ ရောင်ကျောက် ၁ပွင့်၊ မီးခိုးရောင်ကျောက် ၁ပွင့်၊ ရွှေစအသေး ၁ခု၊ အဖြူရောင်ကျောက် ၁ပွင့်၊ အကြည်ရောင် ကျောက် ၁ပွင့် ၊ သလင်းကျောက်အပိုင်းစအကြီး ၁ခု၊ အသေး ၄ခု၊ အမျိုးအမည်မသိ ကျောက်အဖြူရောင် အလတ်စားအရွယ် ၃ပွင့်၊ အသေး ၁ပွင့်၊ သံဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော ထိပ်နှစ်ဘက်တွင် ကွင်းသွားပါသည့် သံထည် ပစ္စည်းတို့ကို ပြန်လည်တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ပြန်လည်တွေ့ရှိသည့် ပစ္စည်းများကို အလှူခံဌာနရှိ မီးခံသေတ္တာထဲတွင် သိမ်းဆည်းထားကြောင်း ဂေါပကအဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးကပြောသည်။
ရှာဖွေမှုနှစ ဖ် ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အားလုံးနီးပါး ပြန်တွေ့ပါတယ်။ စိန်ဖူးတော်က ရတနာမျိုးစုံ ပါဝင်တာ ကြောင့် ကျတဲ့အခါမှာ လွင့်စင်ပျောက်ဆုံး မှုအနည်းငယ်တော့ ရှိပါတယ်။ ရှာဖွေတဲ့ အခါမှာလည်း ဂေါပကအဖွဲ့ရဲ့ ကြီးကြပ်မှုနဲ့အတူ ယန္တယားတပ်က ရဲဘော်တွေ၊ လံခြုံရေး တာဝန်ခံ အရာခံဗိုလ်၊ ရဲတပ်ဖွဲ့တို့နဲ့ပေါင်းပြီး သက်ဆိုင်ရာ သြ၀ါဒစရိယ ဆရာတော်တွေ၊ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ စခန်းမှူး၊ ခရိုင်သာသနာရေးမှူး၊ ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေ့ရဲ့ရှေ့မှာ သေချာစစ်ဆေးပြီးမှ ရှာဖွေစေပါတယ်။ စိန်ဖူးတော် ပြန်တင်ဖို့အတွက် ငြမ်းဆင် ဖို့လည်း ညှိနှိုင်းစည်းဝေးမှုတွေ လုပ်နေပါတယ် လို့ အဆိုပါ တာဝန်ရှိသူက ပြောသည်။ စိန်ဖူးတော်ကို ရွှေ၊ ရတနာပစ္စည်းမျိုးစုံနှင့် ပြုလုပ်ထားပြီး မူလစိန်ဖူးတော် အလေးချိန်မှာ ရွှေ ၁၄၆.၉၈ကျပ်သား၊ ကျောက်မျက် ရတနာမျိုးစုံမှာ ၁၃.၇၉ကျပ်သားရှိကြောင်း သိရသည်။
ဗီယက်နမ် ဆိုရှယ်လစ် သမ္မတ နိုင်ငံ သမ္မတ မြန်မာ နိုင်ငံသို့ ချစ်ကြည်ရေး ခရီး လာရောက် မည်
ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာ နိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နှင့် ဇနီး ဒေါ်ခင်ခင် ဝင်းတို့၏ ဖိတ်ကြားချက် အရ ဗီယက်နမ် ဆိုရှယ်လစ် သမ္မတ နိုင်ငံ သမ္မတ မစ္စတာ ကျုံးသန်စန်းနှင့် ဇနီး မဒမ် မိုင်သီဟိုက် တို့သည် ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာ နိုင်ငံ တော်သို့ မကြာမီ ကာလ အတွင်း တရားဝင် ချစ်ကြည်ရေး ခရီး လာရောက် မည် ဖြစ်သည်။
ရှမ်းအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရေး ဆွေး...
မူဆလင်ကုလားများအား ဂေါ်ရခါးအမည်ဖြင့် တပ်ရင်းသစ်များ...
လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အပြောင်း...
ဆီးဂိမ်းအတွက် အကြံပေးနိုင်တဲ့ အားကစားဝန်ကြီးဌာန ၀က...
အတင်းအဓမ္မ လက်ထပ် ခိုင်းစေမှု ရန်ကုန်မြို့တွင် ဖြစ်ပ...
လူအများရှေ့တွင် နမ်းမိသည့်အတွက် မဖွယ်မရာပြုလုပ်သည်...
ထားဝယ် ရေနက်ဆိပ်ကမ်းနှင့် မြန်မာလူငယ်တို့အတွက် အလု...
နိုင်ငံတကာပဋိပက္ခဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့ICG ၏ ငြိမ်းချမ်းေ...
၀ံလက်ဖောင်ဒေးရှင်းမှ ရခိုင်ဒုက္ခသည်တွေအတွက် အရေးပေါ်...
မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနယ်စပ် လူဝင်လူထွက် ဂိတ်များ ပြန...
ပုံမှန် အခြေအနေ ပြန်လည် ရရှိမှသာ ပြည်တွင်း လုံခြုံ...
တောင်အာရှ နိုင်ငံများတွင် စစ်သွေးကြွ များအား ထိရော...
ငလျင်ဒဏ်ကြာင့် ပျက်စီးခဲ့သည့် မန်းစွယ်တော်ဘုရားစိန...
ဗီယက်နမ် ဆိုရှယ်လစ် သမ္မတ နိုင်ငံ သမ္မတ မြန်မာ နိုင်...
ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ ကထိန်သင်္ကန်...
အမရ ပူရမြို့နယ်တွင် ကျောက်စိမ်း စေတီ တည်ထား ကိုးကွ...
လေ့လာသင်ခန်းစာဖြင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး (ဒေါက်တာေ...
နှေးကွေးနေသည့် ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး တိုးတက်မှု
မြန်မာ လေကြောင်းလိုင်းမှ ကမ္ဘောဒီးယားသို့ ပထမဆုံး ခ...
လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းရန် စီစဥ...
မန္တလေး၌ သိန်း ၆၃ဝ တန်ဖိုးရှိ မီးပွိုင့်များ တပ်ဆင်...